အင်္ဂါနေ့နံနက်အပူပိုင်းဒေသသတင်းများ: မက္ကစီကိုပင်လယ်ကွေ့တွင်အားသွန်ခွန်စိုက်ဆက်လီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း subtitles September 30, 2020
အင်္ဂါနေ့နံနက်အပူပိုင်းဒေသသတင်းများ: မက္ကစီကိုပင်လယ်ကွေ့တွင်အားသွန်ခွန်စိုက်ဆက်လီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း subtitles
အိုင်တီ အိုင်တီနောက်သို့ အိုင်တီနောက်သို့ အိုင်တီသင်နောက်သို့ အိုင်တီသင်တို့အားလုံးကိုနောက်သို့ အိုင်တီသင်တို့အားလုံးကိုပြန် အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။ အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။ အားလုံး အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်, ကောင်းပါပြီ။ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်သည်၊ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီလို သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်သည်, Gရာမဖြစ်ကြ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ သင့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းချက်။ ရှင်းလင်းချက်။ အားလုံး ရှင်းလင်းချက်။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ စို့ ကောင်းပါပြီ။ 'S ရအောင် ကောင်းပါပြီ။ 'S ရပြီကြကုန်အံ့ ကောင်းပါပြီ။ 'S ရပြီကြကုန်အံ့ ကောင်းပါပြီ။ ပေးဆောင်ကြကုန်အံ့စို့ ကောင်းပါပြီ။ အခုအချိန်မှာငွေပိုကြကုန်အံ့ ကောင်းပါပြီ။ အခုငါ့အားဆပ်ဖို့ကြပါစို့ငါ အခုငါ့အားဆပ်ဖို့ကြပါစို့ငါ ငါယုံကြည်ဖို့အခုဆိုရင်ငွေရဖို့ကြပါစို့ အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည် AND အခုငါငွေပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်စစ်ဆေးပါ အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်ထွက်စစ်ဆေးပါ အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်ထဲကစစ်ဆေးပါ ယုံကြည်ပြီးထွက်စစ်ဆေးပါ ယုံကြည်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ကိုစစ်ဆေးပါ ယုံကြည်ပြီးနှင့်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပါ ယုံကြည်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီမှုနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်စစ်ဆေး ယုံကြည်ပြီးနောက်ဆုံး SURY နှင့်အတူနောက်ဆုံးထွက်စစ်ဆေး။ SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, WE SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> ဟုတ်တယ်, ငါတို့ပဲ SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00 >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00 >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00 pm တွင် >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE >> ဟုတ်, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE IN >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE AND >> ဟုတ်, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE နှင့် NO >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE နှင့် NO BIG AM UPDATE နှင့် NO BIG AM UPDATE နှင့် BIG အပြောင်းအလဲများမရှိပါ AM UPDATE နှင့် BIG အပြောင်းအလဲမပါ။ ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ငါတို့ပါပဲ ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ငါတို့ရပြီ ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE လေတိုက်ပါတယ် ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ကျနော်တို့ရပ်တန့် Winds ပါတယ် ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE တည်ငြိမ်သောလေ တိုက်၍ ရရှိပါသည် ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ် WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ် WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ်။ ။ ။ SO ။ ဒါပါပဲ ။ ဒါ Holding ရဲ့ ။ ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ GUST ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ နေဆဲ ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ နေဆဲ AT ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ 1 မှာနေ့ရမည် ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ ဆက်လက် 10င် ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ 105 ကို AT နေဆဲလေ။ 105 ကို AT နေဆဲလေ။ 105. ကို AT နေဆဲလေ 10င်5မှာဆဲနေရမည်။ လှုပ်ရှားမှု 10င်5ဆဲနေရမည်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိပါ 10င်5ဆဲဆဲ။ လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ကြပြီမဟုတ် လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲမရှိပါ လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ သူတို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှ လွဲ၍ လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ သူတို့အတွက်တစ် ဦး ကပိုရှိသည် သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက် သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက်ဘက်လှုပ်ရှားမှု၏ သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အိုင်တီအနောက်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အိုင်တီရှိရာအနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အိုင်တီရှိရာအနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုအနောက်မြောက် အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုဒါပေမယ့်အနောက်မြောက်ပေမယ့် အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုအိုင်တီအနောက်ပိုင်းပေမယ့်အိုင်တီရဲ့ အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီ အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်ခက်ခဲပါတယ် အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းရွေ့လျားပါတယ် အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းကိုရွှေ့ အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းအားလုံးရွေ့လျားရဲ့။ ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ ယင်း ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ အခြေခံအားဖြင့်အိုင်တီ ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ THE ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအား ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအားပေးမှု DID ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအားကျဆင်းသွား ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအား 1 ကျဆင်းသွားသည် ဖိအား 1 ကျဆင်းသွားသည် ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းသွားသည် ဖိအား SO 1 မီလီမီတာကျဆင်းသွားသည် ဖိအား 1 မီလီမီတာဒီ DROP DID ဖိအားသည် ၁ မီလီဂရမ်လျော့နည်းသွားသည် ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းဒါကြောင့်ဒီချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး သန်းကြွယ်သူဌေးဒီတော့ချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး မီလီဂရမ်ဒါအလျင်အမြန်နိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နိုးထ နိုးထ ယင်း နိုးထ အဲဒါမဟုတ်ဘူး နိုးထ အိုင်တီချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး နိုးထ ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ။ ။ ။ ယင်း ။ အိုင်တီရုံပါပဲ ။ အိုင်တီရုံမျိုးပါပဲ ။ အိုင်တီ့ ။ အိုင်တီ Holding ့မျိုး အိုင်တီ Holding ့မျိုး အိုင်တီ STEADY Holdings့အိုင်တီ STEADY Holdings့အိုင်တီတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးပါပဲ အိုင်တီတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးနှင့်ဘာလဲ အိုင်တီသာတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးကျနော်တို့ဘာလဲ တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့ကားအဘယ်သို့ တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ထားရာ တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ရာကဘာလဲ တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ရာကဘာလဲ မြဲမြံစွာရပ်တည်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည့်အရာ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်တည်မြဲသောအရာ တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ထားရာကျွန်ုပ်တို့သည်သွားသည်အတိုင်းကြည့်ရှုရန် မျှော်လင့်ပါတယ်ငါတို့သွားသည် ကျနော်တို့သွားလေ၏ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား ကျနော်တို့သွားလေ၏ကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား ကျနော်တို့သွားလေ၏အဖြစ်ကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့် အကြွင်းအကျန်မှတဆင့် ယနေ့အကြွင်းအကျန်မှတဆင့်။ ဒီနေ့ ဒီနေ့ မင်း ဒီနေ့ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီနေ့ သင်မြင်နိုင်ပါတယ် ဒီနေ့ သင်မြင်နိုင်ပါ ဒီနေ့ ထိုအရပ်၌ကြည့်ရှုနိုင်သလား ဒီနေ့ FLASH ကြည့်ရှုနိုင်သလား FLASH ကြည့်ရှုနိုင်သလား FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည် FLASH ရေလွှမ်းမိုးနာရီကိုကြည့်နိုင်သလား FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်တယ် FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေသောနာရီကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည် FLASH ရေလွှမ်းမိုးခြင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည် ရေလွှမ်းမိုးသောစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည် ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် အရှေ့တောင်အတွက်ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲရှိသည် အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ FLASH ရှိသည် အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲရေလွှမ်းမိုး နေဆဲရေလွှမ်းမိုး နေဆဲရေလွှမ်းမိုးသောစောင့်ကြည့်ရှိသည် နေဆဲ FLASH ရေလွှမ်းမိုးစောင့်ကြည့် တောင်ဘက်တွင် FLASH ရေလွှမ်းမိုးမှုစောင့်ကြည့်နေဆဲရှိသည် တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက် FLASH ရေစောင့်ကြည့်နေဆဲ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက် FLASH ရေစောင့်ကြည့်နေဆဲ AND တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်ယခုစောင့်ကြည့် တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်ယခုစောင့်ကြည့် တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏ဖြစ်လာမယ့် တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် NOW ကသင်တန်းတက်လိမ့်မည် NOW ကသင်တန်းတက်လာမယ့် NOW ကသင်တန်းယခုတက်မယ့် NOW ကသင်တန်းယခုတက်လာမယ့် NOW ကသင်တန်း၏လာမယ့်တိုင်းဘက် NOW ကသင်တန်း၏လာမယ့်တိုင်းဘက် အခုအချိန်မှာသင်တန်းတက်မယ့်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် NOW ကသင်တန်း၏မုန်တိုင်း၏တစ် ဦး ချင်းစီဘက်မှာ ကျော်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် ဒီမှာအပေါ်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် ဒီမှာကျော်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် FLORIDA ဒီမှာဒီမှာမုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် ဒီမှာ Storm ၏တစ် ဦး ချင်းစီဘက် Floreida နှင့် ဒီမှာ Storm မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် FLORIDA နှင့်ထဲသို့ ဒီမှာ Florida နှင့်ထဲသို့ ဒီမှာ FLORIDA နှင့် Alabama သို့။ Alabama ။ Alabama ။ သောပါပဲ Alabama ။ ဘယ်မှာလဲ Alabama ။ သင်ဘယ်မှာလဲ Alabama ။ သင်ရှိရာအရပ်၌ပါပဲ Alabama ။ သင်တစ် ဦး ရှိရာအရပ်၌ပါပဲ Alabama ။ သင်အသစ်တခုရှိရာအရပ်၌ပါပဲ သင်အသစ်တခုရှိရာအရပ်၌ပါပဲ သငျသညျသစ်တစ်ခုရှိသည်လေဆင်နှာမောင်းရှိရာ သငျသညျအသစ်တခုလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာရှိရဲ့ သငျသညျအသစ်တခုရှိလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာပါပဲ သငျသညျအသစ်တစ်ခုကိုလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာရှိသလဲ သငျသညျအသစ်သောတိုနာနဒိုစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာသောအရာသည်အဘယ်မှာရှိ သောကြာနေ့ကစောင့်ကြည့်နေ Tornado နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်သောတိုနာနိုစောင့်ကြည့် Tornado စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းတွင် ဒီနေ့အထိနောက်လာသော Tornado စောင့်ကြည့်။ ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒီနေ့နောက်ကျ။ SO ဒီနေ့နောက်ကျ။ ငါတို့လို ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒီတော့ငါတို့မ ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်မပါဘူး ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်ထားပါဘူး ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပြPROနာကိုတကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး ဒီတော့ဒီမှာပြTHနာကတကယ်မျှော်လင့်မထားပါဘူး။ ဒီမှာပြနာ။ ဒီမှာပြနာ။ အဲဒီမှာ ဒီမှာပြနာ။ ရှိသည် ဒီမှာပြနာ။ တစ် ဦး ရှိပါတယ် ဒီမှာပြနာ။ အသက်ရှင်သည် ဒီမှာပြနာ။ ရှင်သန်နေသော Radar တစ်ခုရှိတယ် ဒီမှာပြနာ။ အသက်ရှင် LADAR ကြည့်ရှုပါ ဒီမှာပြနာ။ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက် RADAR ကြည့်ရှုပါ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက် RADAR ကြည့်ရှုပါ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာကြည့်ရှုပါ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာ BIT ကြည့်ရှုပါ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာအနီးကပ်ကြည့်ရှု။ နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ မင်း နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်လုပ်နိုင်သည် နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်မြင်နိုင်ပါတယ် နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်မြင်နိုင်ပါ နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ အဲဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်သလား နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့မြင်နိုင်ပါသည် အဲဒီမှာသင့်ရဲ့မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာကြည့်နိုင်သလားခင်ဗျားရဲ့အပြင်ပန်း အဲဒီမှာခင်ဗျားရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးတွေရှိတယ် အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်တွေရှိတယ် အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်ရဲ့ရှိတယ် အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်ရဲ့ရှိတယ် ဒီနေရာမှာဗဟိုရဲ့သင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ရှိတယ် ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးများ ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးနံရံဒီမှာ ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ဒီမှာကြိုးစားနေ ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ဒီမှာကြိုးစားနေ ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးများဒီမှာကြိုးစားနေ ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝဒီမှာ STORMS GET ဖို့ကြိုးစားနေ အပြင်ဗဟိုမြင်ကွင်း၏နံရံသည်အုတ်ခဲများကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည် WORAP ပျက်စီးခြင်းကိုရယူရန်ကြိုးစားနေဒီမှာ ဒီမှာ Storm တွေကို GET ဖို့ကြိုးစားနေ WRAP ပတ်ပတ်လည်။ ပတ်ပတ်လည်။ ပတ်ပတ်လည်။ SO ပတ်ပတ်လည်။ ဟုတ်တယ် ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်သင်သိ, ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မသိ, ငါတို့မသိ ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်မထားဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်မထားဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်ပါဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီအရာတွေကိုတကယ်မျှော်လင့်မထားပါနဲ့ ဒါကြောင့်ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီဟာကိုတကယ်မျှော်လင့်မိဖို့ငါတို့မျှော်လင့်မထားပါနဲ့ အမှန်တကယ်အားလပ်ရက်ဒီအရာ အမှန်တကယ်အများကြီးဒီနည်းကိုဒီအရာ အမှန်တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကဒီအရာ အမှန်တကယ်အများကြီးနိုင်ဒီအရာ ဒီနည်းကိုအမှန်တကယ်အတော်အတန်အိုင်တီလုပ်တဲ့အတိုင်း ဒီနည်းကိုအမှန်တကယ်အတော်အတန်အိုင်တီလုပ်တဲ့အတိုင်း ဒီနည်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောရရင်အိုင်တီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီနည်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောရရင်အိုင်တီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် အိုင်တီ၎င်း၏နည်းလမ်းစေသည်အဖြစ်အများကြီး အိုင်တီဒီနည်းကိုအတွက်နည်းလမ်းစေသည်အဖြစ်အများကြီး ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်နည်းလမ်းဖြစ်စေသည် ဒီနည်းကိုဒီနည်းအားဖြင့်ဤနည်းလမ်းသည်ယေဘုယျAရိယာတွင်ဖြစ်စေသည် ဒီနည်းကိုဒီနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ ယင်း ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ ဖြစ်နိုင်သည် ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီဖြစ်နိုင်ခြေ့ ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီဖြစ်နိုင်ပါတယ့်ကိုင်ထားရဲ့ ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီအိုင်တီ၌ကိုင်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ် အိုင်တီအိုင်တီ၌ကိုင်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ် အိုင်တီဒီနည်းကို့ကိုင်ထားရဲ့။ ကိုယ်ပိုင်။ ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ် ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ရထား ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်း ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်း.ရိယာ ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်းONရိယာ ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းခြေREရိယာအလွန်ရရှိ ကမ်းခြေAရိယာအလွန်ရယူ ကမ်းခြေREရိယာအလွန်နီးကပ်လာ ကမ်းခြေVရိယာအလွန်နီးကပ်လာ BILOXI နှင့်အလွန်နီးကပ်လာကမ်းခြေREရိယာ။ BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်ပါပဲ BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်ရပြီ BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်တချို့ရရှိပါသည် BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ အချို့ငွေချေးစာတမ်းများကိုသင်ရပြီ BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သငျသညျအခြို့သောချရတယ်နှင့် သငျသညျအခြို့သောချရတယ်နှင့် သငျသညျအခြို့သောချို့ယွင်းချက်များရရှိပါသည်နှင့်သော သင်အချို့ချို့ယွင်းချက်တွေရပြီနှင့့့် သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့့့် သငျသညျအခြို့သောချို့ယွင်းချက်တွေရပြီနှင့်သွားမယ့် သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့်ဖြစ်မယ့် သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့်ဖြစ်မယ့် ့ဖြစ်မယ့် ့ဖြစ်ဖို့သွားရဲ့ ့ဖြစ်သွားတော့မည် အဲဒီမှာဖြစ်သွားမယ့်ဒီမှာ ့ဖြစ်ခြင်းသွားဒီနေရာမှာဒီနည်းကို ဒီနည်းကိုဖွစျဖို့ဒီနည်းကိုဒီမနက်မှာ ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက် ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာ ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာ ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်အရှေ့တောင်ဘက်၌ ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA ၌ပုံပြင်။ ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ WE ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ငါတို့မသိဘူး ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ငါတို့မရှိကြပါဘူး ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ကျနော်တို့တကယ်မရှိကြပါဘူး ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ကျနော်တို့တစုံတခုမျှအမှန်တကယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ကျနော်တို့တစုံတခုမျှအမှန်တကယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ကျနော်တို့တကယ်ကိုသွားစရာမလိုပါ ကျနော်တို့တကယ်ဘာမှမသွားဘူး ကျနော်တို့တကယ်ဘာမှလွဲပြီးသွားစရာမလိုပါ WE အမှန်တကယ်မရှိကြပါဘူး FOR မှလွဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်မှလွဲလျှင်ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာပါ တချို့အတွက်မှလွဲ။ သွား အချို့သော SHOWER FOR မှလွဲ။ သွား ရရှိရန်အတွက်အချို့သော SHOWER များအတွက်မှလွဲ။ အချို့သောစျေးဝယ်သူများအတွက်မှလွဲ။ သွား။ အဲဒီမှာတချို့စျေးသည်များမှလွဲ။ သွားအဲဒီမှာ အဲဒီမှာဖြောင့်ရရှိခြင်း အဲဒီမှာဖြောင့် GET အဲဒီမှာဖြောင့်ရရှိခြင်းသို့ အဲဒီမှာဖြောင့် GET အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိ အဲဒီမှာညာဘက်ရရှိမှု OFF အမျိုးအစား အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိခြင်း OFF OFF အမျိုးအစား အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိခြင်းကမ်းခြေကမ်းခြေသို့ ကမ်းခြေကမ်းခြေသို့ ကမ်းခြေကမ်းခြေသို့ ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ BERNARD ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ ထဲသို့ BERNARD ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ ထဲသို့ BERNARD ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ အသံထဲသို့ BERNARD ST ၏ အသံထဲသို့ BERNARD ST ၏ အသံထဲသို့ BERNARD ။ ။ ။ ဒါပေမဲ့ ။ ဒါပေမဲ့၏ ။ ဒါပေမဲ့သင်တန်း ။ ဒါပေမဲ့သင်တန်း၏ ။ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မမြင်ရ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မမြင်ရ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်တော့ဘာမှမကြည့်ရှုပါ သို့သော်သင်တန်း၏တစုံတခုကိုမျှမြင်နေမဟုတ်ပါဘူး သို့သော်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအမှန်တကယ်မမြင်နိုင်ပါ သို့သော်သင်တန်း၏လူ ဦး ရေတွင်အရာခပ်သိမ်းကိုတကယ်မမြင်ရပါဘူး သို့သော်သင်တန်းသည်လူကြိုက်များသောဒေသများတွင်မည်သည့်အရာမျှမမြင်ရပါ လူ ဦး ရေထူထပ်သောနေရာဒေသရှိမည်သည့်အရာမဆို လူနေထူထပ်သောနေရာများတွင်မည်သည့်အရာမဆို ဒီနေရာမှာလူ ဦး ရေဒေသဆိုင်ရာတစ်ခုခု ဒီနေရာမှာလူ ဦး ရေထူထပ်သောမည်သည့်နေရာ၌မဆို။ ဤအချက်မှာ။ ဤအချက်မှာ။ Hurricane ဤအချက်မှာ။ Hurricane Tallyies ဤအချက်မှာ။ Hurricane Tallyies ခြေရာခံ ဤအချက်မှာ။ Hurricane TALLIES AS ခြေရာခံ ဤအချက်မှာ။ OF Hurricane Tallyies ခြေရာခံ OF Hurricane Tallyies ခြေရာခံ Hurricane Tallyies သောကြာနေ့ AS ခြေရာခံ Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND Hurricane Tallyies သောကြာနေ့နှင့်သင်ခြေရာခံ Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်နိုင် Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်မြင်နိုင်ပါတယ် Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့လုပ်ပါ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့မျှော်လင့်ပါဘူး သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့အိုင်တီမျှော်လင့်ပါ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့အိုင်တီမျှော်လင့်ပါ သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ >> သူတို့လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ >> သူတို့လုပ်ဖို့ဒီမျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ >> သူတို့ကဒီနည်းကိုမျှော်လင့်လုပ်ပါလှည့် >> သူတို့က IT မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ AND ဖွင့် >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ဒီနည်းကိုဖွင့်နှင့်မျိုး >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်တယ်ဒီအလှည့်အပြောင်း >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ဒီနည်းကိုဖွင့်နှင့်နောက်ထပ် >> သူတို့ကဖွင့်မျှော်လင့်တယ်, ထိုဖွင့်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ် >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ပါဘူးတစ် ဦး ကဖွင့်နှင့်တစ် ဦး ၏နောက်ထပ် နောက်ထပ်ဖွင့်သောမျိုး နောက်ထပ်ဖွင့်နှင့်မြောက်ပိုင်း၏ နောက်ထပ်ဖွင့်သောမြောက်ပိုင်းလည်ပတ် နောက်ထပ်ဖွင့်နှင့်မြောက်ပိုင်းသို့လည်ပတ် AS နောက်ထပ်ဖွင့်သောမြောက်ပိုင်းငါတို့ကဲ့သို့ငါတို့လည်ပတ် နောက်ထပ်ဖွင့်သောအမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးနှကျောကြှနျုပျတို့အလှည့်အလှည့် WE သွားလေ၏အဖြစ်မြောက်ပိုင်းသို့လှည့် မြောက်ဘက်သို့ငါတို့လှည့်လည် ယနေ့ငါတို့သွားသကဲ့သို့မြောက်ပိုင်းသို့လှည့်။ ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီရဲ့ ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီသွားမယ့် ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီသွားမယ့် ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီဖြစ်လာမယ့် ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီအထွေထွေဖြစ်မယ့် ဒါပေမဲ့အိုင်တီအထွေထွေဖြစ်မယ့် ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့် WOBBLING ခံရဖို့ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သွားမယ့် ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်သွားမယ့် ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာ။ ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒီမှာလှည့်လည်။ SO ဒီမှာလှည့်လည်။ ငါတို့လို ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စေနိုင်သည် ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တစ် ဦး ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု OR ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်ငါတို့အနောက်မြောက်သို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်နိုင်သည် သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလား ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ် AN ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့တစ်ခု ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်အနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်အနောက်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်အရှေ့ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်မြောက်ကိုရီးယား ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု။ ။ ။ ယင်း ။ အိုင်တီရုံပါပဲ ။ အိုင်တီရုံပါပဲ ။ အိုင်တီရုံခရီးသွားလာ ။ ဒါ SO ခရီးသွားလာပါတယ် ဒါ SO ခရီးသွားလာပါတယ် ဒါ SO တဖြည်းဖြည်းခရီးသွား့ အိုင်တီဒါခရီးသွားလာရုံပါပဲ အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီသွား အိုင်တီဒီနည်းနဲ့ခရီးသွားလာ့့အိုင်တီသွားမယ့် အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီဖြစ်လာမယ့် အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီ၌ဖြစ်မယ့် အိုင်တီဒီနည်းကိုခရီးသွားလာ့့အိုင်တီဒီနည်းကိုတွင်ဖြစ်မယ့် တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့် တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့် တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့်ဒီနေရာမှာ BY 1:00 BY ဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်တဖြည်းဖြည်း တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာဖြစ်လာမယ့် 1:00 pm တွင် BY တဖြည်းဖြည်းဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်ယနေ့ည 1:00 BY တဖြည်းဖြည်းဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်ယနေ့ည 1:00 BY ဒီမှာ ဒီမှာ 1:00 pm တွင်ရိယာ 1:00 AM ယနေ့ညအားဖြင့်ဒီမှာ 1:00 AM ယနေ့ညအနားမှာဒီမှာ 1:00 AM ယနေ့ည။ ဒီမှာဒီမှာအနားမှာရပြီ 1:00 AM ယနေ့ညအားဖြင့်ဒီမှာ။ ဒီမှာနီးကပ်လာ THE နီးကပ်လာ မစ္စစ္စပီနှင့်နီးကပ်ခြင်း မစ္စစ္စပီအသံနှင့်နီးကပ်လာခြင်း မစ္စစ္စပီနှင့်နီးကပ်ခြင်းအသံနှင့် မစ္စစ္စပီနှင့်နီးစပ်ခြင်းအသံနှင့်ထို့နောက် မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက် မစ္စစ္စပီအသံနဲ့လုပ်နေတာ မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက်လုပ်ရန် မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက်ကျနော်တို့ LANDFALL လုပ်နေပါလိမ့်မယ် မစ္စစ္စပီအသံမြည်ပြီးနောက် LANDFALL လုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါလိမ့်မည် LANDFALL ကိုလုပ်ပါ LANDFALL လုပ်ခြင်းတစ်ခါတစ်ရံမှာပြောမည် LANDFALL ကိုလုပ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်လေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ LANDFALL ကိုလုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြောမည် LANDFALL ကိုလုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ကဲ့သို့ပြောနိုင်သည် တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် AS တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်အဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းမှာလက်ရှိ တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းမှာလက်ရှိအတွေးအဖြစ်။ လက်ရှိစဉ်းစား။ လက်ရှိစဉ်းစား။ တစ်နေရာရာ လက်ရှိစဉ်းစား။ တစ်နေရာရာ၌ လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုခု လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာ, လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနည်းကို ZONE ထဲမှာတစ်နေရာရာ၏ ဒီနည်းကို ZONE ထဲမှာတစ်နေရာရာ၏ ဒီနည်းကို ZONE ၌, သင်တန်း၏ ဒီဇုန်တွင်တစ်စုံတစ်ခု, သင်တန်း၏ IF ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာ, အကယ်။ သင်တန်း, သင်တန်း ဒီဇုန်၌တစ်စုံတစ်ခု, သင်တန်းဆက်ပြောသည်လျှင်သင်တန်း၏ သင်တန်းဆက်ပြောသည်ဆိုပါကသင်တန်း ဆက်ပြောသည်ဆိုပါကသင်တန်း WOBBLE မှဆက်လက်ပါကသင်တန်း အိုင်တီ WOBBLE မှဆက်လက်လျှင်သင်တန်း ဒီနည်းကို WOBBLE မှဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှင်သင်တန်း ဒီနည်းကို WOBBLE နဲ့ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လုပ်နိုင်ပါတယ် လှုပ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် IT ကိုရွေ့လျားရန် LANDFALL ပြုလုပ်နိုင်သည် IT ကို WOBBLE လုပ်ရန်ဒီမှာ LANDFALL လုပ်နိုင်ပါတယ် ၎င်းကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ပြုလုပ်နိုင်ပါက IF IT ကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုဒီမှာလုပ်နိုင်ပါတယ် IT WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုဒီမှာလုပ်နိုင်ပါတယ် ၎င်းကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါက၎င်းသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက LANDFALL ဒီမှာအိုင်တီဆိုပါက LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင် LANDFALL ဒီမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်လျှင် LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနောက်ထပ် LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင်ဒီနည်းကိုနောက်ထပ်နည်း LANDFALL ဒီမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနောက်တဖန်အိုင်တီ အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီ အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီဖြစ်နိုင်ပါတယ် အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုစမ်းကြည့်ပါ အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနည်းနည်းကြိုးစားကြည့်ပါ အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီလုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုနည်းနည်းဒီနည်းကို LANDFALL လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုနည်းနည်းဒီနည်းကို LANDFALL လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ LANDFALL လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ LANDFALL ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင့်အားသင့်ကိုကျော်ဖြတ်စေနိုင်သည် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်သိထားသည့်အတိုင်းကြိုးစားပါ။ LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုးစားသင့်သည်၊ ဘာလ်ဝင်း LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုးစားသင့်သည်၊ သင်သိသည်၊ ဘော်လ်တန်လား သင်သိသည်ဖြစ်စေ၊ ဝဲလ်၊ သင်သိသောအရာများ၊ ၀ က်ဝံသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း သင်သိသောအရာများ၊ ဝဲလ်ဝင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ။ မိုဘိုင်း County ။ မိုဘိုင်း County ။ သော မိုဘိုင်း County ။ ဒါက မိုဘိုင်း County ။ သောဆက်ဆက်သည် မိုဘိုင်း County ။ သောတစ် ဦး က IS မိုဘိုင်း County ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုနှင့်အတူ ဤသည်နှင့်အတူAကန်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေ ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည် ဤအရာသည်တစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု ဤသည်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်ဤ ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် 1 ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစား 1 STORM အဖြစ် ဒီနည်းကိုတစ် ဦး အဖြစ်အမျိုးအစား 1 Storm ဒီနည်းကိုတစ် ဦး ကအမျိုးအစား 1 STORM BY ဒီနည်းကိုတစ် ဦး ကအမျိုးအစား 1 STORM အဖြစ်ဒီနေ့ ဒီနည်းကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ကပုံ 1 STORM AS ဒီနေ့ဒီနေ့ရရှိ ဒီနည်းကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ပထမအဆင့် STORM AS သောကြာနေ့သို့ သောကြာနေ့သို့ တနင်္လာနေ့ BY သို့ ALBAMA သို့ တနင်္ဂနွေနေ့က BY သို့ Alabama သို့ တနင်္ဂနွေ BY BY သို့ Alabama သို့ တနင်္ဂနွေ BY BY သို့ Alabama သို့ BY ပြီးတော့ တနင်္ဂနွေနေ့အနေဖြင့် Alabama သို့, ပြီးတော့သောကြာနေ့ တနင်္ဂနွေအောဘားမားသို့နှင့်ထို့နောက်အိုင်တီသောကြာနေ့အိုင်တီ သောကြာနေ့အိုင်တီ ALABAMA ကို Alabama နှင့်သောကြာနေ့အိုင်တီ IS IS Alabama ပြီးနောက်သောကြာနေ့သို့အိုင်ထဲသို့ Alabama နှင့်သောကြာနေ့အိုင်တီဂျော်ဂျီယာသို့ IS ။ ဂျော်ဂျီယာသို့။ ဂျော်ဂျီယာသို့။ SO ဂျော်ဂျီယာသို့။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဂျော်ဂျီယာသို့။ SO သက်ရောက်မှု ဂျော်ဂျီယာသို့။ အရှေ့တောင်ဘက်သို့သက်ရောက်မှု အရှေ့တောင်ဘက်သို့သက်ရောက်မှု SOUTHEAST LOUISIANA တွင်သက်ရောက်မှုများ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA တွင်ထိုသို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေသေးသည် အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိနေသေးသည် Louisiana နေဆဲအလွန် Louisiana နေဆဲအလွန်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အနည်းဆုံး။ အနည်းဆုံး။ >> အနည်းဆုံး။ >> WE အနည်းဆုံး။ >> WE နိုင်ဘူး အနည်းဆုံး။ >> ကျနော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ် အနည်းဆုံး။ >> WE တစ် ဦး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အနည်းဆုံး။ >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အနည်းဆုံး။ >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီမှာ >> ဒီမှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ဒီမှာ >> WE ဒီမှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ဒီမှာ။ ဒီမှာဒီမှာ။ ဒီမှာဒီမှာ။ မင်း ဒီမှာဒီမှာ။ သတိထားမိ ဒီမှာဒီမှာ။ မင်းတို့သတိထားမိတယ် ဒီမှာဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာကိုသင်သတိပြုမိသည် ဒီမှာဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာရှင်ကိုသတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာရှင်ကိုသတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်လ်ကိုသင်သတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာကိုသတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသတိပြုမိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသင်သတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္KEာန်ကိုထိန်းထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသင်သတိပြုမိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုကောင်းကင်၌ခိုင်မြဲအောင်ထားခြင်းသတိပြုမိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုကောင်းကင်၌ကြီးစွာခုန်အောင်ထိန်းထားသည်ကိုသတိပြုပါ ကောင်းကင်၏ခဲယဉ်း, Heavy မိုး၏ခဲ, မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း။ ရိုင်း။ ရိုင်း။ THE ရိုင်း။ မျက်လုံး ရိုင်း။ မျက်လုံးဝေါလ် ရိုင်း။ ဒီမှာမြင်လိမ့်မည် ရိုင်း။ ဒီမှာကောင်းပြီမျက်လုံးများ ရိုင်း။ ဒီမှာအဝါရောင်ပိတ်ထား ဒီမှာအဝါရောင်ပိတ်ထား ဒီမှာကမ်းခြေအအေး။ ကမ်းခြေ။ ကမ်း။ ကမ်း။ ဒါပေမဲ့ ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပါလိမ့်မယ် ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီကိုကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီကိုကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုအနောက်ပိုင်း၏ဤမျိုးကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီအနောက်ပိုင်းဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့ရှိသည်ဒီအနောက်ဘက်ဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ကြည့်ရှုရန်အနောက်ဘက်ခြမ်းမျိုး အဘယ်အရာကိုမြင်မြင်ဖို့အနောက်ဘက်ဘက်မျိုး အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အနောက်ဘက်ဘက်မှမျိုး အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလိုချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့ အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလိုချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့ အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလုပ်ချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့။ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီကြိုးစားကြည့်ပါ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီကြိုးစားကြည့်ပါ ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ CREEP ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် ဘာလုပ်ချင်လဲ။ ဒီနည်းကိုတချို့ထဲကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါ ဒီနည်းကိုတချို့ထဲကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါ တချို့အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် တချို့အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် အိုင်တီသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားနိုင်ကမ်းခြေအချို့ အိုင်တီ CEPEP သို့ကမ်းလှမ်းရန်ကမ်းခြေAရိယာ။ ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND ၏ ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND သင်တန်း ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND သင်တန်း၏ ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ နှင့်တောင်ပိုင်းသင်တန်း နှင့်တောင်ပိုင်းသင်တန်း နှင့်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏ နှင့်တောင်မစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏ နှင့်တောင်မစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏သင်ဖြစ်နိုင်သည် မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်နိုင်သည် မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်ကောင်းသွားမည် သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမယ့်မစ္စစ္စပီ မစ္စစ္စပီသင်တွေ့နိုင်တာပေါ့ မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်နိုင်သည်မိုးကိုမြင်ရလိမ့်မယ် မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာရွာသွန်းကိုမြင်နိုင်တော့မယ် မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာမိုးရွာနေမှာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ် မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာမိုးရွာနေမှာကိုမြင်ရလိမ့်မယ် ယနေ့ငါရွာသွန်းကြည့်ရှုမယ် ယနေ့မိုးရွာနေသည်ကိုသင်ကြည့်ရှုမည် ယနေ့ခေတ်တွင်ရွာသွန်းကိုမြင်တော့မည် ယနေ့ခေတ်တွင်ရွာသွန်းကိုမြင်ရတော့မည် နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ ကြည့်ပါ နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ ကြည့် နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ WINSLOW ကိုကြည့် နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ WINSLOW စွားကြည့်ရှုပါ WINSLOW စွားကြည့်ရှုပါ WINSLOW သို့သွားကြည့်ကြည့် WINSLOW ကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်နိုင်သည် WINSLOW ကိုကြည့်ရှုမယ်မေလ 40 WINSLOW ကိုကြည့်ရှုကြည့်ပါစေ 40 AT WINSLOW ကိုကြည့်ရှုပါစေ, 40 မှာ AT WSSOW ကိုကြည့်ရှုခြင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် 40 အိုင်ကွန် THE LAKEFRONT LAKEFRONT မှာ 40 ဖြစ်နိုင်သည် ဖြတ်သန်းသွားသော LAKEFRONT တွင် ၄၀ အထိ မှတဆင့် THE LAKEFRONT မှာ 40 ဖို့ နေ့လည်ခင်းတစ်လျှောက်တွင် LAKEFRONT တွင် ၄၀ သို့ရောက်ရန်။ နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ နိုင် နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ မြန်မာ နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တချို့ကြည့်နိုင်ပါတယ် နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တချို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တစ်စုံတစ်ရာသော G ည့်သည်များမြင်နိုင် နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာကတ်ပြားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ 40 ကျော်ကျော်အချို့သောသွားလေ၏ကြည့်ရှုနိုင်ပါ မြောက် 40 တွင်အချို့သောအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ ၄၀ ကျော်ကျော်ရှိသည့်အချို့သောအရာအချို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ 40 ကျော်ကျော်အချို့သောအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်, မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင်, မေ မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိအချို့သောပြသနာပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ပိုနိုင်သည် မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ ၄၀ ကျော်ကျော်ရှိရာအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ ၅၀ နှစ်ကျော်နိုင်ပါသည် မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ ကျော်နိုင် မြောက်ဘက်ကမ်း, 50 ကျော်နိုင် မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ မှ ၆၀ အထိရှိနိုင်ပါသည် မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ မှ ၆၀ အထိရှိနိုင်သည် မြောက်ဘက်ကမ်း, သင် 50,000 ကျော် 60 ဖြစ်နိုင်သည် မြောက်ဘက်ကမ်း, သင်သွားသည်ထက် 50 မှ 60 အထိဖြစ်နိုင်သည် မြောက်ဘက်ကမ်း, သင်ဆင်းသွားသည် 50 မှ 60 ကျော်ရှိနိုင်ပါသည် မြောက်ဘက်ကမ်းခြေ၊ သင်ရှေ့သို့သွားသောအခါ ၅၀ မှ ၆၀ သို့ရောက်နိုင်သည် သင်သွားအဖြစ် AS 60 သငျသညျရှေ့သို့သွား AS တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်ခြေသို့သွားသည် တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်၏တောင်ဘက်သို့ တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်၏တောင်ဘက်သို့ TO သို့သွားသောအခါမြစ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် သင်မြစ်၏တောင်ဘက်သို့သွားသကဲ့သို့ငါမြစ်၏ TO သို့သွားသောအခါမြစ်၏တောင်ဖက်သို့၎င်း၊ မြစ်၏ခံတပ်ပြီးတော့ မြစ်၏ခံသည်နှင့်အမြင့် မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်ပိုမိုမြင့်မားသောလေ မြစ်၏ခံသည်နှင့်အမြင့်လေတိုက် AS မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်သင်ပိုမိုမြင့်မားသော Wind မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်သင်၌ရှိသကဲ့သို့မြင့်မားသောလေ မြစ်၏အရှေ့ဘက်နှင့်တောင်လေအလျားလိုက်တောင်ပိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့ သင်တောင်ပိုင်း၌ရှိသလောက်မြင့်သောလေ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးလေ တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးလေမုန်တိုင်းများနှင့် သင်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်သွားနေစဉ်အမြင့်ဆုံးလေ သင်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသကဲ့သို့သင်ပိုမိုမြင့်မားသောလေထဲသို့ မစ္စစ္စပီသို့သွား မစ္စစ္စပီနှင့် Alabama သို့သွား။ Alabama ။ Alabama ။ SO Alabama ။ ဒါပါပဲ Alabama ။ SO ဘယ်မှာလဲ Alabama ။ သင့်ရဲ့ဘယ်မှာ SO ဒါ Alabama ။ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘယ်မှာ SO ဒါ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘယ်မှာ SO ဒါ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးလေဘယ်မှာ SO ဒါ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးလေဘယ်မှာ SO ဒါ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာလဲဒါဆို သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာသွားမယ့် SO သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာဖြစ်မယ့် SO ။ လေမယ့်လေ။ လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ3လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3TO လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ3မှ5IS လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5pm တွင် IS လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5pm တွင် IS OR လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5PM သို့မဟုတ် SO IS လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေဆဲ ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်နိုင်အောင် ဒီဟာ3မှ5နာရီအထိဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ဆဲချိတ်ဆွဲ ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့အထိဆွဲထား ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေဆဲထွက်ဆွဲထား ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့ဒီမှာထွက်ချိတ်ဆွဲ ဒီနည်းကို3မှ5pm အချိန်အထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေထွက်ဒီမှာဆွဲထား ဒီနည်းကို3မှ5pm အချိန်အထိသို့မဟုတ်ဒီတော့ဒီမှာထွက်ရုံဆွဲထုတ်ဒီမှာ ထဲကအပြင်၌ဆွဲထားဒီမှာ ထဲကအထဲကဆွဲထုတ်ဒီမှာမျိုး OUT ထဲကဆွဲထုတ်ဒီမှာရုံမျိုး OUT ထဲကထွက်ချိတ်ဆက်ဒီမှာအမျိုးမျိုးသော WOBBLING ၏။ WOBBLING ဝန်းကျင်။ WOBBLING ဝန်းကျင်။ WELL WOBBLING ဝန်းကျင်။ ငါတို့ရပါလိမ့်မယ် WOBBLING ဝန်းကျင်။ WE ရပါလိမ့်မယ် WOBBLING ဝန်းကျင်။ ငါတို့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ် WOBBLING ဝန်းကျင်။ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ WOBBLING ဝန်းကျင်။ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ ဤကဲ့သို့သောအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့မွငျရမညျ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါလိမျ့မညျ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနောက်နိုင်ငံများ၏မျိုးကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးများကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။ ဤအနောက်နိုင်ငံများ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနောက်တိုင်းဘက်ခြမ်း၏မျိုးမျိုး၊ ဤရွာသားကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်ဘက်, ဒီရိန်း အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရိုးရိုးချည်နှောင်ခြင်း, အနောက်ဘက်ဖက်, ဒီရိုးရိုး Band, တချို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ဖက်, ဒီရိုးရိုးကြိုးနှင့်ချည်နှောင်အချို့ အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရိုးရိုးကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်း, တချို့မိုးသည်းထန်စွာ အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရာသီခညျြအနှော, တချို့ရွေ့လျားလှည့်လည် လှည့်လည် Band, တချို့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း တီးဝိုင်း, တချို့ရေပန်းများမှတဆင့်ရွေ့။ မှတဆင့်။ မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအား မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အလုံးစုံမဟုတ်အားလုံး မှတဆင့်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ မှတဆင့်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်း သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်း သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရောညပါဖြစ်ပျက် သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ကိုရွာသွန်း သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်းအတွက်တောင်ဘက် သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရောညအရှေ့တောင်အာရှအတွက်ဖြစ်ပျက် သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ရောဂါဖြစ်ပျက်နေပြီအရှေ့တောင် Louisiana အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်အဖြစ်အပျက် အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်အဖြစ်အပျက် အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်သေချာပေါက်။ သေချာသည်။ သေချာသည်။ ဆဌမ သေချာသည်။ ခြောက်ဆ သေချာသည်။ ကိုးဆဌမ သေချာသည်။ ကိုးခြေခြောက်ဆ သေချာသည်။ ကိုးခြေခြောက်ဆ သေချာသည်။ SURGE ၏ကိုးခြေခြောက်ဆ သေချာသည်။ ၌ SUNGE ကိုးခြေခြောက်ဆ ၌ SUNGE ကိုးခြေခြောက်ဆ ဒီနည်းကို SURGE ကိုးခြေခြောက်ဆ ဒီနေရာမှာ SURGE ၏ခြေကိုးခြောက်ဆ။ ဒီနေရာ။ ဒီနေရာ။ >> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို IS ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို ON ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို ON ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာ IS ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ OF >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ ဒါပေါ့ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်း >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းရှိသည် သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းရှိသည် သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းသွားပြီ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းဆင်းသွားပြီ သင်တန်း၏ Surge စုစုပေါင်းဆင်းသွားပြီ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းအတူဆင်းသွားပြီ သင်တန်း၏, SURGE စုစုပေါင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူဆင်းသွားပြီ သင်တန်း၏, SURGE စုစုပေါင်း THE TRACK BEING နှင့်အတူဆင်းသွားပြီ ဖြစ်ပျက်နှင့်အတူသွားပြီ တစ် ဦး ဖြစ်လာသောလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားပြီ အနည်းငယ်ဖြစ်လျက်ရှိလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားပြီ အနည်းငယ်သောဖြစ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူဆင်းသွားပြီ အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျော်ပြီးသွားပါ အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားသောလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပျောက်သွား BIT နောက်ထပ်အရှေ့။ အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ WELL အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ နေဆဲ အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ် အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ် အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ရေကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ။ ။ ငါတို့ပါပဲ ။ ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ပါ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ကြည့်နေသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်NOTကန်အမှန်မမြင်ပါ ။ ကျနော်တို့ဆက်ဆက်မဖြောင့်ကိုကြည့်ပါတယ် ကျနော်တို့ဆက်ဆက်မဖြောင့်ကိုကြည့်ပါတယ် WE NOT C NOT NOT ALL ALL ALL ALL NOT NOT NOT ALL ALL WE NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT C NOT NOT NOT NOT NOT NOT J မမှC္WEင် ER ထ္ ALL ရုံလုံးလုံးမတွေ့ရပါ ငါတို့အားလုံးပဲမမြင်ရပါဘူး ရုပ်ပုံအားလုံးကိုမမြင်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများအားလုံးကိုမမြင်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများ၏ပုံရိပ်အားလုံးကိုမျှမမြင်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိပုံရိပ်အကုန်လုံးကိုမမြင်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိပုံရိပ်အားလုံးကိုမျှမမြင်နိုင်ပါ အောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ် ရေအောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ် ရေအောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ်အားလုံးရှိသည်။ ရေရှိပါတယ်။ ရေရှိပါတယ်။ SO ရေရှိပါတယ်။ SO ON ရေရှိပါတယ်။ SO ပေါ်မှာ ရေရှိပါတယ်။ SO အရှေ့ဘက် ရေရှိပါတယ်။ SO အရှေ့ဘဏ်ပေါ်မှာ ရေရှိပါတယ်။ SO ၏အရှေ့ဘက်ဘဏ် SO ရေရှိပါတယ်။ SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ ဒါကြောင့်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ ဒါကြောင့်အရှေ့မြောက်ဘဏ်ကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်အရှေ့မြောက် ဒါကြောင့်အရှေ့တောင်ဘက်မြင်ဆက်လက်ဆက်လက်အရှေ့မြောက်လေ သောအရှေ့မြောက်လေကြည့်ဖို့ သောအရှေ့မြောက်ဘက်တွန်းအားပေးကြည့်ဖို့ သောအရှေ့မြောက်ဘက် Wind မြင်လျှင်ကြည့်ရှုရန် အချို့သော IN အရှေ့မြောက်လေတိုက်ကြည့်ရှုရန် သောအရှေ့မြောက်ဘက်တွန်းအချို့ကိုရေ၌ကြည့်ရှုရန်။ တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီသော တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီတဲ့အရာ တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီသောအရာ တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ Lake ဘို့တူညီတဲ့အရာ တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ကြည့်ပါ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ပါ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ရှုပါ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့် Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းကြည့်ပါ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတကြည့် ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတကြည့် ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ပါ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ် ဦး ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ်လက်မတစ်ခု ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ်ခုလက်မဒီမှာ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ပါဒီမှာနှစ်ခုလက်မဒီမှာ ဒါပေမဲ့အသစ်စက်စက်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါလက်နှစ်ချောင်းအထိဒီမှာကြည့်ပါ နှစ်လက်မဒီမှာအသစ် New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဒီမှာ New Orleans, မေလ New Orleans အတွက်ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဖို့, နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် နယူးယောက် Orleans အတွက်ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဖို့, နှစ်ခုမှဖြစ်နိုင်သည် New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ, လေးယောက်မှဖြစ်နိုင်သည် New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ, လေးယောက် AS ဖို့ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, လေးနှစ် AS ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သင့်အားလေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သငျသညျသှားဖို့လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သငျသညျတက်သွားအဖြစ်လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သငျသညျသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Orléans, သင်သည်ပုလဲသို့တက်သွားသကဲ့သို့လေးဆယ့်လေးခုဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Orleans, သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည် သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် သင် HANCOCK တွင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် သင် HANCOCK County မှာပုလဲမြစ်သို့တက်။ Hancock County ။ Hancock County ။ AND Hancock County ။ ပြီးတော့ Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီလုပ်ပါတယ် Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီသွားပါ Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီတက်လာ Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ 15 သို့သွားပါ Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ 15 သို့သွားတတ် Hancock County ။ ပြီးတော့ 15 သွား 20 မှတက်တတ် ပြီးတော့ 15 သွား 20 မှတက်တတ် ပြီးတော့ 15 လက် 20 မှ 20 လက်ျာသို့သွားပါ ပြီးတော့ 15 လက် 20 မှ 20 လက်ျာသို့သွားပါ ပြီးတော့သူက 15 လက် 20 မှ 20 လက်မသငျသညျအတိုင်း ထိုအခါသင်တက် AS 15 လက်မမှ 20 လက်ျာသို့သွားလေ၏ ပြီးတော့သင်တက်သို့ 15 လက်မ 20 မှလက်ျာတက်သွားပါ ပြီးတော့သင်က Alabama သို့ထဲသို့ AS 15 လက်မ 20 မှတက်သွားလေ၏ သငျသညျ Alabama သို့သှားသောလက်မ သငျသညျ Alabama သို့သှားသောလက်မ။ ။ ။ WELL ။ ငါတို့ပြောပါလိမ့်မယ် ။ ငါးခုပြောပါမယ် ။ ကျနော်တို့ငါးခုပြောပါလိမ့်မယ် ။ ခုနစ်ခုဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခုနစ်ခု ။ ခုနစ်ခုလက်မငါးခုပြောမယ် ခုနစ်ခုလက်မငါးခုပြောမယ် ခုနစ်ခုလက်မငါးခုလောက်ပြောမယ် WE ငါးခုပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ် Jackson အဘို့လက်မ ကျနော်တို့ခုနစ်လက်မ Jackson Jackson ဘို့ငါးခုပြောပါလိမ့်မယ် Jackson ငါးခုလုံးအတွက်ခုနစ်လက်မအထိငါးခုပြောမယ် Jackson County ထဲသို့ Jackson County Harrison သို့ Jackson County သို့ Harrison County သို့ Jackson County သို့ Harrison County သို့ Jackson County သို့ Harrison County သို့ပြီးတော့ Jackson County သို့ Harrison County ထဲသို့သုံးပြီးတော့ Harry County ပြီးတော့သုံး Harry County ပြီးတော့သုံး Harry County နှင့်သုံးခြောက်ဆ Harry County နှင့်သုံးခုခြောက်ဆလက်မ Harry County နှင့်သုံးခုခြောက်ဆလက်မတစ် ဦး Harrison County ပြီးတော့သုံးခြောက်ဆလက်မတစ်နည်းနည်း Harry County နှင့်ထို့နောက်သုံးခုခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT အနီးကပ် ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာချ ခြောက်လက်မနည်းနည်း BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာအောက်သို့ ခြောက်လက်မနည်းနည်း BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာ THE TO သို့ SIX INCHES အနည်းငယ် BIT နီးကပ်လာကမ်းခြေဆီသို့။ ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ SO ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီနည်းကို ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီနည်းကိုရှိပါတယ် ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲကြသည် ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိန်း ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိန်း ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိုးရိုးစုစုပေါင်း။ စုစုပေါင်း။ စုစုပေါင်း။ ကြည့်ပါ စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါ စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုသင်မကြည့်မိပါစေနဲ့ စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ကြည့်ပါ စုစုပေါင်း။ ဒီတစ်ချက်မကြည့်ရအောင် ဒီတစ်ချက်မကြည့်ရအောင် ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ ဦး ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကိုရွာစေတယ် ဒီနည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မိုးရွာနေတဲ့မိုးစက်တစ်စင်းကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် ဒီနည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မိုးရွာနေလို့သင်ကြည့်ပါ ဒီနည်းကိုကြည့်ကြည့်ပါနဲ့မိုးရွာတာကိုသင်တွေ့ပြီ ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုတ်တရက်မိုးရွာနေလို့သင်ရပြီ သင်တစ် ဦး ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာချ သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာစေ သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာချ သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းရွာသွန်းမှုပိုနည်းသောအရာ အနည်းငယ်ရတဲ့အခါရွာသွန်းမှုနည်းနည်းနည်းနည်းထပ်တိုးပါ သင်အနည်းငယ်နည်းနည်းရလာသည်နှင့်အမျှမိုးရွာချသည်အထိဝေးသည်သို့သွားသည် အနည်းငယ် BIT ဝေးရှေ့သို့ အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND AND အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND နှင့်သွား အနည်းငယ် BIT ဝေးရှေ့သို့သွားသှားသှားကွ အနည်းငယ် BIT ဝေး OFF သို့သွား Hammond နှင့်ထဲသို့သွား သှားသှားသှားကွနှင့် သှားနှင့် BATON သို့သွား သှားနှင့် BATON ROU သို့သွား သှားနှင့် BATON ROUGE Aရိယာသို့သွား သှားနှင့် BATON ROUGE Aရိယာခဲ သှားနှင့် BATON ROUGE REရိယာခဲသမျှ BATON Rouge ခက်ခဲပါတယ် BATON ROUGE ANရိယာအကျယ်တ ၀ င့်သက်ရောက်မှု BATON ROUGE သည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသက်ရောက်မှုများ BATON ROUGE သည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် BATON ROUGE သည်အခြားသောအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ BATON ROUGE ထက်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသက်ရောက်မှုများ BATON ROUGE Aရိယာတစ် ဦး ထက်အခြားအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုခက်ခဲ အခြားတစ် ဦး ကထက်သက်ရောက်မှု အေးခဲသောအခြားအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အေးခဲသည်။ အေးခဲသည်။ ကွမ်း အေးခဲသည်။ Kurds လေ အေးခဲသည်။ ရယူခြင်း Kind လေ အေးခဲသည်။ ရဖို့လေ အေးခဲသည်။ ပေါင်မုန့် 53 မှလေတိုက် အေးခဲသည်။ KURD လေတိုက် 53 သို့သွားလေ၏ KURD လေတိုက် 53 သို့သွားလေ၏ ပေါင်မုန့် 53 သို့သွားလေ၏လေ ပေါင် ၅၃ သို့သွားသောတောင်လေ ပါးစပ်။ ပါးစပ်။ သုံးဆယ် ပါးစပ်။ သုံးဆယ့်ခြောက် ပါးစပ်။ သုံးဆယ်ခြောက်ဆ ပါးစပ်။ စည်တွင်သုံးဆယ်ခြောက်ဆ ပါးစပ်။ SHELL ကမ်းခြေတွင်သုံးဆယ့်ခြောက် ပါးစပ်။ SH BE AT AT SH TH TH TH ၃၀ SH W BE SH SH SH SH SH BE AT AT SH TH TH TH ၃၀ SH W BE SH SH SH SH SHELL ကမ်းခြေတွင်သုံးဆယ့်ခြောက်ဆို့ ကမ်းရိုးတန်းမှာသုံးဆယ့်ခြောက်ဆယ့် ELL AT BE BE SIX TH S သုံးဆယ်ခြောက်ဆယ့်ငါးပေရှိရမည် ELL AT SH F S သုံးဆယ်ခြောက်ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ရောက်နေပြီ SH AT SH IR S IX IX S SHELL SH ELL SH SH ELL SH SH SH SH SH SH SH ၃၀ SH SH SH TH SH S IX SH SH SHELL SH SH SHELL SH ၃၀ SH SHELL SH SH SH SH SH SH SH SH SH S SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ပက်တီ ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ကလေးလေး ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ Pety Boy ကျွန်း ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ သော Pety Boy ကျွန်း ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ကျွန်း ထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ကျွန်း ထိုင်နေတဲ့သေးငယ်သောကျွန်းလေးကျွန်း ထိုင်နေတဲ့သေးငယ်သောကျွန်းသေးသေးလေးပဲ ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ Pety Boy ကျွန်း ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ Pety Boy ကျွန်း ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ISLAND JACKSON County တောင်ဘက်တောင်ဘက်။ Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်ထရီနာ Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်ထရင်းဖြတ် Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်သရင်းဖြတ်။ ကက်သရင်းဖြတ်။ ကက်သရင်းဖြတ်။ သောပါပဲ ကက်သရင်းဖြတ်။ သောပါပဲ ကက်သရင်းဖြတ်။ သောကျွန်းပါပဲ ကက်သရင်းဖြတ်။ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ တည်မြဲသည် သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ ဆက်တိုက်လေ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ ၏တည်ငြိမ်သောလေ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ လေးဆယ်၏တည်ငြိမ်သောလေ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ လေးဆယ်၏တည်မြဲသောလေတိုက် လေးဆယ်၏တည်မြဲသောလေတိုက် လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်ခံသောအလေအလိုက် လေးဆယ်သုံးဆယ်၏တည်ရှိနေသောအအေးခန်းလေးဆယ့်ခြောက် လေးဆယ်သုံးဆယ့်ရှစ်မိုင်၏ရေရှည်တည်တံ့သောအရာ လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်အအေးလေးဆယ်ဆယ့်ခြောက်မိုင် လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်အအေးတစ်နာရီလေးဆယ်ဆယ့်ခြောက်မိုင် လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်တိုက်လေယာဉ်လေးနာရီဆယ့်ခြောက်မိုင်နှုန်းတစ်နာရီအတွင်း နာရီတစ်နာရီလေးဆယ်မိနစ် တစ်နာရီလေးနာရီမိုင်နှုန်းအကွာအဝေး တစ်နာရီလျှင်လေးဆယ့်လေးမိုင်လောက်ရှိ တစ်နာရီလျှင်လေးဆယ်ဆယ့်လေးမိုင်နှုန်းတွင်ဒေါဖမြို့ရှိလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း ဒီ့ပြင်ကျွန်းမှာတစ်နာရီလေးဆယ့်ခြောက်မိုင်လောက်ရှိတယ်။ DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ SO DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ SO သင်ပါပဲ DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ဆက်နေပါတယ် DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ ဒါကြောင့်သင်ဆက်လက်ရပ်တည်နေ WINDES အမြဲတမ်း ဒါကြောင့်သင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်ပွဲအချို့သော Tropical ဖြစ်ကြသည် ဒါကြောင့်သင်တည်ငြိမ်သော Window တွေဆက်တိုက်အပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်း ဒါကြောင့်သင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော Winds များရေပန်းစားနေသော Storm Storm အထူးသဖြင့် TROPICAL မုန်တိုင်းအင်အားစု ထိန်းသိမ်းထား TERPICAL STORM သင့်၏အတိုင်းအတာအစဉ်အလာအရမုန်တိုင်းဒဏ်ခံအင်အားစု သငျသညျသွားလေ၏အတိုင်းအတာအထိ TROPICAL မုန်တိုင်းအင်အားစု သင်ရှေ့သို့သွားစဉ်ဆက်တိုက်အားဖြည့်အင်အားစု သင်ဆီသို့သွားစဉ်ဆက်တိုက်အပူပိုင်းဒေသအားအရှိန်အဟုန် ကမ်းရိုးတန်းဆီသို့သင်သွားသည့်အတိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ် TROPICAL STORM FORCE သင်ကမ်းခြေဆီသို့သွားသကဲ့သို့ ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သင်သွားသည့်အတိုင်း ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သင်သွားသည့်အနေနှင့် ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီနှင့် ဦး ခေါင်းသို့သင်သွားသောအခါ သငျသညျကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့ ဦး တည်နှင့်တက် HEADING သငျသညျကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သွားနှင့်ထဲသို့တက် မစ္စစ္စပီသို့တက် မစ္စစ္စပီနှင့် UPLABAMA သို့တက်။ Alabama ။ Alabama ။ OF Alabama ။ ဒါပေါ့ Alabama ။ သူတို့ကို၏ Alabama ။ သူတို့သညျသင်တန်း Alabama ။ သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း Alabama ။ သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း သူတို့တစ်ခုတည်းသောတိုးလာမယ့်သင်တန်း သူတို့သာ AS တိုးမြှင့်ဖို့သွားကြသည် သူတို့တစ်ခုတည်းသောကျနော်တို့တိုးမြှင့်ဖို့သွားကြသည် သူတို့တစ်ခုတည်းသာကျနော်တို့သွားအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖို့သွား သူတို့တစ်ခုတည်းသာကျနော်တို့ဖြတ်သန်းသွားတိုးမြှင့်ဖို့သွား ငါတို့ရှောက်သွားအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖို့ ယနေ့ငါတို့သွားသကဲ့သို့တိုးမြှင့်ဖို့။ ဒီနေ့ ဒီနေ့ SO ဒီနေ့ SO လေ ဒီနေ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက် ဒီနေ့ ဒီမှာလေသက်ရောက်မှု ဒီနေ့ ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုသက်ရောက်မှု ဒီနေ့ ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုလာမယ့် ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုလာမယ့် ဒီမှာလေတိုက်ပွဲများသွားပါ ဒီမှာလေတိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်လာမယ့် ဒီမှာလေတိုက်သက်ရောက်မှုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်မယ့် ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မည် ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်တော့မယ် အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါငါတို့ အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပါပဲ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပဲရှိသည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ့်သွားနေပြီ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ့်သွားတော့မည်ဖြစ်သည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်တော့မည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ရတော့မည် တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါ တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါ တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါသို့မဟုတ်လွဲချော် တကယ်တော့ HIT သို့မဟုတ်လွဲချော် SHOWER ကြည့်ဖို့သွား တကယ်တော့့ဒီနေ့ HIT ကြည့်ပါသို့မဟုတ်လွဲချော်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း တကယ်တော့ဒီနည်းကိုယနေ့ကြည့်ရှုသွားပါသို့မဟုတ်လွဲချော် ဒီနေ့ OR လွဲချော် ဒီနေ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်လွဲချော်မှုများ ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီနာတွင်သို့မဟုတ်လွဲချော်သူများ ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်အဝေးသို့လွင့်ပြေးသူများ ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားနားသို့လွမ်းဆွတ်မှုအနည်းငယ်သာ အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အနည်းငယ် အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana နည်းနည်း အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana အနည်းငယ်သာ BIT အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana နည်းနည်းပိုကျယ်ပြန်ကျယ်ပြန့် အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA နည်းနည်းပိုကျယ်ပြန့်ပြီးမစ္စစ္စပီပို ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်မစ္စစ္စပီ BIT ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်မစ္စစ္စပီရေကြီးမှု WIDESPREAD MISSISSIPPI ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုပိုမိုကိုက်ပါ အဓိကကျသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်မစ္စစ္စIPPIကိုအဓိကကျသည် အဓိကကျသောခြိမ်းခြောက်နေသောမစ္စစ္စပီပီ (BID နောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်သောနေရာ) အဓိကအားဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးမှု မစ္စစ္စပီတွင်ရေကြီးမှုအန္တရာယ် \_ t Alabama ပြည်နယ်, အဓိကအားဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးမှု မစ္စစ္စပီ၊ အဘမ်ဘာနှင့်အဓိကရုဏ်း မစ္စစ္စပီ, Alabama AND မစ္စစ္စပီ, Alabama နှင့်ဖလိုရီဒါ မစ္စစ္စပီ, Alabama နှင့်ဖလောရီဒါ 30 မစ္စစ္စပီ, အလာဘမ်နှင့်ဖလိုရီဒါ ၃၀ အခွင့်အလမ်း မစ္စစ္စပီ, အလာဘရာနှင့်Флорида 30 အခွင့်အလမ်း ရွာသွန်းနိုင်သည့်မစ္စစ္စပီ, အလာဘရာနှင့်ဖလိုရီဒါ ၃၀ ရွိုင်း 30 အခွင့်အလမ်း မိုးမရွာသောФлоридаအခွင့်အလမ်း ၃၀ FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE မနက်ဖြန် FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE WE START FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE WE START FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE GRADUAL ကိုစတင် မနက်ဖြန်ဒီကျောင်းစတင် နက်ဖြန်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုစတင်သည် မနက်ဖြန်ငါတို့ခြောက်သွေ့ GRADUAL လမ်းကြောင်းကိုစတင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည် GRADUAL ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုစတင်မည်မနက်ဖြန် မနက်ဖြန်ငါတို့စတင်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့လမ်းကြောင်းကိုစတင် မနက်ဖြန်ငါတို့ကျောင်းစတင်နေပြီခြောက်သွေ့လမ်းကြောင်းကိုထိုအခါစတင်ကြည့်ရှုပါ မနက်ဖြန်ငါတို့ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စတင်ပြီးနောက်ထိုအခါကြည့်ရှုပါ ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းသစ်သို့ကြည့်ရှုပါ ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်
<text sub="clublinks" start="0.4" dur="0.1">အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="0.5" dur="0.033"> အိုင်တီနောက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="0.533" dur="0.1"> အိုင်တီနောက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="0.633" dur="0.067"> အိုင်တီသင်နောက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="0.7" dur="0.067"> အိုင်တီသင်တို့အားလုံးကိုနောက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> အိုင်တီသင်တို့အားလုံးကိုပြန်</text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="1.235"> အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။</text>
<text sub="clublinks" start="2.135" dur="0.1"> အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။ အားလုံး</text>
<text sub="clublinks" start="2.235" dur="0.2"> အိုင်တီသင် STUDIO အားလုံးပြန်။ ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="2.435" dur="0.234"> ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="2.669" dur="0.067"> ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="2.736" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="2.836" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="2.936" dur="0.133"> ကောင်းပါပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်,</text>
<text sub="clublinks" start="3.069" dur="0.2"> ကောင်းပါပြီ။ သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="3.269" dur="0.201"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="3.47" dur="0.166"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်သည်၊</text>
<text sub="clublinks" start="3.636" dur="0.134"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီလို</text>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.1"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="3.87" dur="0.167"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်သည်, Gရာမဖြစ်ကြ</text>
<text sub="clublinks" start="4.037" dur="0.133"> သငျသညျအများကြီး, Duke ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။</text>
<text sub="clublinks" start="4.17" dur="0.234"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။</text>
<text sub="clublinks" start="4.404" dur="0.067"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.066"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="4.537" dur="0.1"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.067"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> ဟုတ်တယ်, Gရာမသဲအိတ်များ။ သင့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="1.401"> သင့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="6.172" dur="0.167"> ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="6.339" dur="0.2"> ရှင်းလင်းချက်။</text>
<text sub="clublinks" start="6.539" dur="0.1"> ရှင်းလင်းချက်။ အားလုံး</text>
<text sub="clublinks" start="6.639" dur="0.167"> ရှင်းလင်းချက်။ ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="6.806" dur="0.234"> ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="7.04" dur="0.067"> ကောင်းပါပြီ။ စို့</text>
<text sub="clublinks" start="7.107" dur="0.166"> ကောင်းပါပြီ။ 'S ရအောင်</text>
<text sub="clublinks" start="7.273" dur="0.034"> ကောင်းပါပြီ။ 'S ရပြီကြကုန်အံ့</text>
<text sub="clublinks" start="7.307" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ 'S ရပြီကြကုန်အံ့</text>
<text sub="clublinks" start="7.407" dur="0.067"> ကောင်းပါပြီ။ ပေးဆောင်ကြကုန်အံ့စို့</text>
<text sub="clublinks" start="7.474" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ အခုအချိန်မှာငွေပိုကြကုန်အံ့</text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.066"> ကောင်းပါပြီ။ အခုငါ့အားဆပ်ဖို့ကြပါစို့ငါ</text>
<text sub="clublinks" start="7.64" dur="0.267"> အခုငါ့အားဆပ်ဖို့ကြပါစို့ငါ</text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.067"> ငါယုံကြည်ဖို့အခုဆိုရင်ငွေရဖို့ကြပါစို့</text>
<text sub="clublinks" start="7.974" dur="0.1"> အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည် AND</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.067"> အခုငါငွေပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်စစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.141" dur="0.067"> အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်ထွက်စစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> အခုငါပေးချေရအောင်ငါယုံကြည်သည်နှင့်ထဲကစစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.234"> ယုံကြည်ပြီးထွက်စစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.1"> ယုံကြည်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ကိုစစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="1.702"> ယုံကြည်ပြီးနှင့်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="10.31" dur="0.1"> ယုံကြည်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီမှုနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်စစ်ဆေး</text>
<text sub="clublinks" start="10.41" dur="0.233"> ယုံကြည်ပြီးနောက်ဆုံး SURY နှင့်အတူနောက်ဆုံးထွက်စစ်ဆေး။</text>
<text sub="clublinks" start="10.643" dur="0.167"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။</text>
<text sub="clublinks" start="10.81" dur="0.1"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >></text>
<text sub="clublinks" start="10.91" dur="0.201"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah,</text>
<text sub="clublinks" start="11.111" dur="0.1"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, WE</text>
<text sub="clublinks" start="11.211" dur="0.066"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> ဟုတ်တယ်, ငါတို့ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="11.277" dur="0.134"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="11.411" dur="0.133"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="11.544" dur="0.067"> SALLY Hurricane နှင့်အတူနောက်ဆုံး။ >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00</text>
<text sub="clublinks" start="11.611" dur="0.2"> >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00</text>
<text sub="clublinks" start="11.811" dur="0.134"> >> yeah, ငါတို့ရပြီ 7:00 pm တွင်</text>
<text sub="clublinks" start="11.945" dur="0.067"> >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE</text>
<text sub="clublinks" start="12.012" dur="0.066"> >> ဟုတ်, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE IN</text>
<text sub="clublinks" start="12.078" dur="0.067"> >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE AND</text>
<text sub="clublinks" start="12.145" dur="0.067"> >> ဟုတ်, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE နှင့် NO</text>
<text sub="clublinks" start="12.212" dur="0.066"> >> yeah, WE ရပြီ 7:00 AM UPDATE နှင့် NO BIG</text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.267"> AM UPDATE နှင့် NO BIG</text>
<text sub="clublinks" start="12.545" dur="0.1"> AM UPDATE နှင့် BIG အပြောင်းအလဲများမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.101"> AM UPDATE နှင့် BIG အပြောင်းအလဲမပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="12.746" dur="0.233"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။</text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="1.235"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ငါတို့ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="14.214" dur="0.167"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ငါတို့ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="14.381" dur="0.166"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE လေတိုက်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="14.547" dur="0.067"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ ကျနော်တို့ရပ်တန့် Winds ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="14.614" dur="0.067"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE တည်ငြိမ်သောလေ တိုက်၍ ရရှိပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="14.681" dur="0.067"> ဒီမှာအပြောင်းအလဲများ။ WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="14.748" dur="0.166"> WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="14.914" dur="0.067"> WE 85 ဆက်တိုက်အနိုင်ရပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="14.981" dur="0.167"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="15.148" dur="0.133"> ။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="15.281" dur="0.134"> ။ ဒါပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.133"> ။ ဒါ Holding ရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="15.548" dur="0.1"> ။ ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.201"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="15.849" dur="0.1"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ GUST</text>
<text sub="clublinks" start="15.949" dur="0.067"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.033"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ နေဆဲ AT</text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.067"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ 1 မှာနေ့ရမည်</text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="2.168"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ ဆက်လက် 10င်</text>
<text sub="clublinks" start="18.284" dur="0.167"> ဒါတည်ငြိမ်ကျင်းပနေပါတယ်။ 105 ကို AT နေဆဲလေ။</text>
<text sub="clublinks" start="18.451" dur="0.2"> 105 ကို AT နေဆဲလေ။</text>
<text sub="clublinks" start="18.651" dur="0.167"> 105. ကို AT နေဆဲလေ</text>
<text sub="clublinks" start="18.818" dur="0.134"> 10င်5မှာဆဲနေရမည်။ လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="18.952" dur="0.133"> 10င်5ဆဲနေရမည်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.085" dur="0.067"> 10င်5ဆဲဆဲ။ လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ကြပြီမဟုတ်</text>
<text sub="clublinks" start="19.152" dur="0.234"> လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.386" dur="0.066"> လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.452" dur="0.1"> လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.1"> သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.101"> သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.753" dur="0.066"> သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.819" dur="0.034"> သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှအပလှုပ်ရှားမှုတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.853" dur="0.066"> သူတို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှ လွဲ၍ လှုပ်ရှားမှု မှလွဲ၍ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="19.919" dur="0.301"> သူတို့အတွက်တစ် ဦး ကပိုရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="20.22" dur="0.167"> သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="20.387" dur="0.133"> သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="0.067"> သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အနောက်မြောက်ဘက်လှုပ်ရှားမှု၏</text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.066"> သူတို့အဘို့မှလွဲ။ အိုင်တီအနောက်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="20.653" dur="0.201"> အိုင်တီရှိရာအနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="20.854" dur="1.568"> အိုင်တီရှိရာအနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="22.422" dur="0.167"> အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="22.589" dur="0.066"> အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုအနောက်မြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="22.655" dur="0.101"> အိုင်တီအနောက်ဘက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုဒါပေမယ့်အနောက်မြောက်ပေမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="22.756" dur="0.066"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုအိုင်တီအနောက်ပိုင်းပေမယ့်အိုင်တီရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="22.822" dur="0.234"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="23.056" dur="0.133"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်ခက်ခဲပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="23.189" dur="0.067"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းရွေ့လျားပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="23.256" dur="0.067"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းကိုရွှေ့</text>
<text sub="clublinks" start="23.323" dur="0.1"> အနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ခဲ့ပေမယ့်အိုင်တီခဲယဉ်းအားလုံးရွေ့လျားရဲ့။</text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="0.2"> ခဲအားလုံးရွေ့လျား။</text>
<text sub="clublinks" start="23.623" dur="0.167"> ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ ယင်း</text>
<text sub="clublinks" start="23.79" dur="0.2"> ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ အခြေခံအားဖြင့်အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="23.99" dur="0.1"> ခဲအားလုံးရွေ့လျား။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="24.09" dur="0.2"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="24.29" dur="0.167"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ THE</text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="1.969"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအား</text>
<text sub="clublinks" start="26.426" dur="0.1"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအားပေးမှု DID</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.067"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအားကျဆင်းသွား</text>
<text sub="clublinks" start="26.593" dur="0.066"> ၎င်းသည်အခြေခံကျသည်။ ဖိအား 1 ကျဆင်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="26.659" dur="0.301"> ဖိအား 1 ကျဆင်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="26.96" dur="0.067"> ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="27.027" dur="0.066"> ဖိအား SO 1 မီလီမီတာကျဆင်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="27.093" dur="0.067"> ဖိအား 1 မီလီမီတာဒီ DROP DID</text>
<text sub="clublinks" start="27.16" dur="0.067"> ဖိအားသည် ၁ မီလီဂရမ်လျော့နည်းသွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="27.227" dur="0.133"> ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="27.36" dur="0.067"> ဖိအား 1 မီလီဂရမ်ကျဆင်းဒါကြောင့်ဒီချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="27.427" dur="0.3"> သန်းကြွယ်သူဌေးဒီတော့ချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="27.727" dur="0.1"> မီလီဂရမ်ဒါအလျင်အမြန်နိုးမဟုတ်ပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.201"> နိုးထ</text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.066"> နိုးထ ယင်း</text>
<text sub="clublinks" start="28.094" dur="3.237"> နိုးထ အဲဒါမဟုတ်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="31.331" dur="0.233"> နိုးထ အိုင်တီချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="31.564" dur="0.067"> နိုးထ ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="31.631" dur="0.167"> ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.067"> ၎င်းသည်မြန်ဆန်ခိုင်မာခြင်းမရှိပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="31.865" dur="0.2"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> ။ ယင်း</text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.1"> ။ အိုင်တီရုံပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="32.265" dur="0.067"> ။ အိုင်တီရုံမျိုးပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="32.332" dur="0.133"> ။ အိုင်တီ့</text>
<text sub="clublinks" start="32.465" dur="0.067"> ။ အိုင်တီ Holding ့မျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="32.532" dur="0.234"> အိုင်တီ Holding ့မျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="32.766" dur="0.066"> အိုင်တီ STEADY Holdings ့</text>
<text sub="clublinks" start="32.832" dur="0.134"> အိုင်တီ STEADY Holdings ့</text>
<text sub="clublinks" start="32.966" dur="0.1"> အိုင်တီတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="33.066" dur="0.067"> အိုင်တီတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးနှင့်ဘာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="0.066"> အိုင်တီသာတည်ငြိမ်ကိုင်ထားရုံမျိုးကျနော်တို့ဘာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="33.199" dur="0.234"> တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့ကားအဘယ်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="33.433" dur="0.033"> တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ထားရာ</text>
<text sub="clublinks" start="33.466" dur="0.1"> တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ရာကဘာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="0.067"> တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ရာကဘာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="33.633" dur="0.067"> မြဲမြံစွာရပ်တည်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည့်အရာ</text>
<text sub="clublinks" start="33.7" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်တည်မြဲသောအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="33.767" dur="0.066"> တည်ငြိမ်ပြီးငါတို့မျှော်လင့်ထားရာကျွန်ုပ်တို့သည်သွားသည်အတိုင်းကြည့်ရှုရန်</text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="1.502"> မျှော်လင့်ပါတယ်ငါတို့သွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.133"> ကျနော်တို့သွားလေ၏ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="35.468" dur="0.167"> ကျနော်တို့သွားလေ၏ကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်</text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="35.702" dur="0.067"> ကျနော်တို့သွားလေ၏အဖြစ်ကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်</text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.233"> အကြွင်းအကျန်မှတဆင့်</text>
<text sub="clublinks" start="36.002" dur="0.1"> ယနေ့အကြွင်းအကျန်မှတဆင့်။</text>
<text sub="clublinks" start="36.102" dur="0.2"> ဒီနေ့</text>
<text sub="clublinks" start="36.302" dur="0.067"> ဒီနေ့ မင်း</text>
<text sub="clublinks" start="36.369" dur="0.1"> ဒီနေ့ သင်လုပ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> ဒီနေ့ သင်မြင်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.067"> ဒီနေ့ သင်မြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="36.636" dur="0.1"> ဒီနေ့ ထိုအရပ်၌ကြည့်ရှုနိုင်သလား</text>
<text sub="clublinks" start="36.736" dur="0.067"> ဒီနေ့ FLASH ကြည့်ရှုနိုင်သလား</text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="0.234"> FLASH ကြည့်ရှုနိုင်သလား</text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.1"> FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.137" dur="0.066"> FLASH ရေလွှမ်းမိုးနာရီကိုကြည့်နိုင်သလား</text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.167"> FLASH ရေလွှမ်းမိုးနေသောနာရီကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.067"> FLASH ရေလွှမ်းမိုးခြင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.537" dur="0.2"> ရေလွှမ်းမိုးသောစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.737" dur="1.635"> ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="39.372" dur="0.167"> အရှေ့တောင်အတွက်ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="39.539" dur="0.133"> အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="39.672" dur="0.234"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="39.906" dur="0.1"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="40.006" dur="0.067"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.1"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="40.173" dur="0.1"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲ FLASH ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="40.273" dur="0.067"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA သည်။ နေဆဲရေလွှမ်းမိုး</text>
<text sub="clublinks" start="40.34" dur="0.233"> နေဆဲရေလွှမ်းမိုး</text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.067"> နေဆဲရေလွှမ်းမိုးသောစောင့်ကြည့်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="40.64" dur="0.1"> နေဆဲ FLASH ရေလွှမ်းမိုးစောင့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.2"> တောင်ဘက်တွင် FLASH ရေလွှမ်းမိုးမှုစောင့်ကြည့်နေဆဲရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.067"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက် FLASH ရေစောင့်ကြည့်နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.067"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက် FLASH ရေစောင့်ကြည့်နေဆဲ AND</text>
<text sub="clublinks" start="41.074" dur="0.2"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.067"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်ယခုစောင့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.133"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်ယခုစောင့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="41.474" dur="0.1"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.034"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="41.608" dur="0.066"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="1.769"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယခုသင်တန်း၏ဖြစ်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="43.443" dur="0.067"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် NOW ကသင်တန်းတက်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="43.51" dur="0.2"> NOW ကသင်တန်းတက်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="43.71" dur="0.1"> NOW ကသင်တန်းယခုတက်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="43.81" dur="0.067"> NOW ကသင်တန်းယခုတက်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> NOW ကသင်တန်း၏လာမယ့်တိုင်းဘက်</text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> NOW ကသင်တန်း၏လာမယ့်တိုင်းဘက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> အခုအချိန်မှာသင်တန်းတက်မယ့်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.066"> NOW ကသင်တန်း၏မုန်တိုင်း၏တစ် ဦး ချင်းစီဘက်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="44.21" dur="0.201"> ကျော်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.066"> ဒီမှာအပေါ်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.477" dur="0.134"> ဒီမှာကျော်မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.066"> FLORIDA ဒီမှာဒီမှာမုန်တိုင်း၏ဘေးထွက်</text>
<text sub="clublinks" start="44.677" dur="0.101"> ဒီမှာ Storm ၏တစ် ဦး ချင်းစီဘက် Floreida နှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.066"> ဒီမှာ Storm မုန်တိုင်း၏ဘေးထွက် FLORIDA နှင့်ထဲသို့</text>
<text sub="clublinks" start="44.844" dur="0.267"> ဒီမှာ Florida နှင့်ထဲသို့</text>
<text sub="clublinks" start="45.111" dur="0.1"> ဒီမှာ FLORIDA နှင့် Alabama သို့။</text>
<text sub="clublinks" start="45.211" dur="0.234"> Alabama ။</text>
<text sub="clublinks" start="45.445" dur="0.1"> Alabama ။ သောပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="45.545" dur="0.067"> Alabama ။ ဘယ်မှာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="45.612" dur="0.1"> Alabama ။ သင်ဘယ်မှာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="45.712" dur="0.033"> Alabama ။ သင်ရှိရာအရပ်၌ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="1.769"> Alabama ။ သင်တစ် ဦး ရှိရာအရပ်၌ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.066"> Alabama ။ သင်အသစ်တခုရှိရာအရပ်၌ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="47.58" dur="0.267"> သင်အသစ်တခုရှိရာအရပ်၌ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="47.847" dur="0.1"> သငျသညျသစ်တစ်ခုရှိသည်လေဆင်နှာမောင်းရှိရာ</text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.101"> သငျသညျအသစ်တခုလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာရှိရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.1"> သငျသညျအသစ်တခုရှိလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="48.148" dur="0.1"> သငျသညျအသစ်တစ်ခုကိုလေဆင်နှာမောင်းစောင့်ကြည့်ဘယ်မှာရှိသလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="48.248" dur="0.066"> သငျသညျအသစ်သောတိုနာနဒိုစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာသောအရာသည်အဘယ်မှာရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="48.314" dur="0.201"> သောကြာနေ့ကစောင့်ကြည့်နေ Tornado</text>
<text sub="clublinks" start="48.515" dur="0.066"> နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်သောတိုနာနိုစောင့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="48.581" dur="0.1"> Tornado စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းတွင်</text>
<text sub="clublinks" start="48.681" dur="0.101"> ဒီနေ့အထိနောက်လာသော Tornado စောင့်ကြည့်။</text>
<text sub="clublinks" start="48.782" dur="0.166"> ဒီနေ့နောက်ကျ။</text>
<text sub="clublinks" start="48.948" dur="0.067"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="49.015" dur="0.1"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ ငါတို့လို</text>
<text sub="clublinks" start="49.115" dur="0.134"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒီတော့ငါတို့မ</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="2.335"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်မပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်ထားပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ဒီနေ့နောက်ကျ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.267"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="52.018" dur="0.1"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပြPROနာကိုတကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.1"> ဒီတော့ဒီမှာပြTHနာကတကယ်မျှော်လင့်မထားပါဘူး။</text>
<text sub="clublinks" start="52.218" dur="0.234"> ဒီမှာပြနာ။</text>
<text sub="clublinks" start="52.452" dur="0.067"> ဒီမှာပြနာ။ အဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="52.519" dur="0.033"> ဒီမှာပြနာ။ ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="52.552" dur="0.1"> ဒီမှာပြနာ။ တစ် ဦး ရှိပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="52.652" dur="0.1"> ဒီမှာပြနာ။ အသက်ရှင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="52.752" dur="0.1"> ဒီမှာပြနာ။ ရှင်သန်နေသော Radar တစ်ခုရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="52.852" dur="0.034"> ဒီမှာပြနာ။ အသက်ရှင် LADAR ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="52.886" dur="0.066"> ဒီမှာပြနာ။ တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက် RADAR ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="52.952" dur="0.234"> တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက် RADAR ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="53.186" dur="0.067"> တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="53.253" dur="0.133"> တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာ BIT ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.1"> တစ် ဦး ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ RADAR အနည်းငယ်သာအနီးကပ်ကြည့်ရှု။</text>
<text sub="clublinks" start="53.486" dur="2.069"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။</text>
<text sub="clublinks" start="55.555" dur="0.167"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ မင်း</text>
<text sub="clublinks" start="55.722" dur="0.067"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်လုပ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.166"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်မြင်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="55.955" dur="0.134"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ သင်မြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="56.089" dur="0.1"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ အဲဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်သလား</text>
<text sub="clublinks" start="56.189" dur="0.067"> နည်းနည်းနီးကပ်လာ။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.233"> အဲဒီမှာသင့်ရဲ့မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="56.489" dur="0.067"> ဒီမှာကြည့်နိုင်သလားခင်ဗျားရဲ့အပြင်ပန်း</text>
<text sub="clublinks" start="56.556" dur="0.1"> အဲဒီမှာခင်ဗျားရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးတွေရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="56.656" dur="0.067"> အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်တွေရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.067"> အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်ရဲ့ရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.133"> အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝေါင်ရဲ့ရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="56.923" dur="0.067"> ဒီနေရာမှာဗဟိုရဲ့သင့်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="56.99" dur="0.2"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးများ</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="2.436"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးနံရံဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.033"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ဒီမှာကြိုးစားနေ</text>
<text sub="clublinks" start="59.659" dur="0.134"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝန်းကျင်ဒီမှာကြိုးစားနေ</text>
<text sub="clublinks" start="59.793" dur="0.133"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးများဒီမှာကြိုးစားနေ</text>
<text sub="clublinks" start="59.926" dur="0.1"> ဗဟို၏အပြင်ဘက်မျက်လုံးဝဒီမှာ STORMS GET ဖို့ကြိုးစားနေ</text>
<text sub="clublinks" start="60.026" dur="0.067"> အပြင်ဗဟိုမြင်ကွင်း၏နံရံသည်အုတ်ခဲများကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="60.093" dur="0.233"> WORAP ပျက်စီးခြင်းကိုရယူရန်ကြိုးစားနေဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="60.326" dur="0.101"> ဒီမှာ Storm တွေကို GET ဖို့ကြိုးစားနေ WRAP ပတ်ပတ်လည်။</text>
<text sub="clublinks" start="60.427" dur="0.166"> ပတ်ပတ်လည်။</text>
<text sub="clublinks" start="60.593" dur="0.067"> ပတ်ပတ်လည်။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="60.66" dur="0.1"> ပတ်ပတ်လည်။ ဟုတ်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="60.76" dur="0.1"> ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်သင်သိ,</text>
<text sub="clublinks" start="60.86" dur="0.1"> ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့</text>
<text sub="clublinks" start="60.96" dur="0.134"> ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မသိ, ငါတို့မသိ</text>
<text sub="clublinks" start="61.094" dur="0.067"> ပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="61.161" dur="0.2"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="61.361" dur="0.133"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်မထားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="61.494" dur="0.034"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်မထားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="61.528" dur="0.133"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိ, ငါတို့ဒီနည်းကိုမျှော်လင့်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="61.661" dur="0.134"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီအရာတွေကိုတကယ်မျှော်လင့်မထားပါနဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="61.795" dur="0.066"> ဒါကြောင့်ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီဟာကိုတကယ်မျှော်လင့်မိဖို့ငါတို့မျှော်လင့်မထားပါနဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="2.069"> အမှန်တကယ်အားလပ်ရက်ဒီအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="63.93" dur="0.067"> အမှန်တကယ်အများကြီးဒီနည်းကိုဒီအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.167"> အမှန်တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကဒီအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.1"> အမှန်တကယ်အများကြီးနိုင်ဒီအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="64.264" dur="0.066"> ဒီနည်းကိုအမှန်တကယ်အတော်အတန်အိုင်တီလုပ်တဲ့အတိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="64.33" dur="0.134"> ဒီနည်းကိုအမှန်တကယ်အတော်အတန်အိုင်တီလုပ်တဲ့အတိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="64.464" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောရရင်အိုင်တီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="64.564" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောရရင်အိုင်တီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="64.631" dur="0.2"> အိုင်တီ၎င်း၏နည်းလမ်းစေသည်အဖြစ်အများကြီး</text>
<text sub="clublinks" start="64.831" dur="0.133"> အိုင်တီဒီနည်းကိုအတွက်နည်းလမ်းစေသည်အဖြစ်အများကြီး</text>
<text sub="clublinks" start="64.964" dur="0.101"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်နည်းလမ်းဖြစ်စေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="65.065" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းအားဖြင့်ဤနည်းလမ်းသည်ယေဘုယျAရိယာတွင်ဖြစ်စေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="65.165" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းအားဖြင့်ဤနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="65.265" dur="0.2"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။</text>
<text sub="clublinks" start="65.465" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ ယင်း</text>
<text sub="clublinks" start="65.632" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီဖြစ်နိုင်ခြေ့</text>
<text sub="clublinks" start="65.832" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီဖြစ်နိုင်ပါတယ့်ကိုင်ထားရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.066"> ဒီနည်းကိုဒီနေ့အထွေထွေREရိယာ။ အိုင်တီအိုင်တီ၌ကိုင်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="65.965" dur="0.201"> အိုင်တီအိုင်တီ၌ကိုင်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.1"> အိုင်တီဒီနည်းကို့ကိုင်ထားရဲ့။</text>
<text sub="clublinks" start="66.266" dur="1.568"> ကိုယ်ပိုင်။</text>
<text sub="clublinks" start="67.834" dur="0.133"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="67.967" dur="0.167"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်</text>
<text sub="clublinks" start="68.134" dur="0.067"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ရထား</text>
<text sub="clublinks" start="68.201" dur="0.1"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား</text>
<text sub="clublinks" start="68.301" dur="0.067"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား</text>
<text sub="clublinks" start="68.368" dur="0.067"> ကိုယ်ပိုင်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား</text>
<text sub="clublinks" start="68.435" dur="0.266"> ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရထား</text>
<text sub="clublinks" start="68.701" dur="0.101"> ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်း</text>
<text sub="clublinks" start="68.802" dur="0.133"> ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်း.ရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="68.935" dur="0.1"> ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းရိုးတန်းONရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="69.035" dur="0.067"> ဒါပေမဲ့အခုအကြီးအကျယ်ရုတ်တရက်ကမ်းခြေREရိယာအလွန်ရရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="69.102" dur="0.233"> ကမ်းခြေAရိယာအလွန်ရယူ</text>
<text sub="clublinks" start="69.335" dur="0.034"> ကမ်းခြေREရိယာအလွန်နီးကပ်လာ</text>
<text sub="clublinks" start="69.369" dur="0.133"> ကမ်းခြေVရိယာအလွန်နီးကပ်လာ</text>
<text sub="clublinks" start="69.502" dur="0.1"> BILOXI နှင့်အလွန်နီးကပ်လာကမ်းခြေREရိယာ။</text>
<text sub="clublinks" start="69.602" dur="0.234"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။</text>
<text sub="clublinks" start="69.836" dur="0.067"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="69.903" dur="2.002"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="0.167"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သင်တချို့ရရှိပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="72.072" dur="0.066"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ အချို့ငွေချေးစာတမ်းများကိုသင်ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="72.138" dur="0.067"> BILOXI သို့ချဉ်းကပ်။ သငျသညျအခြို့သောချရတယ်နှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.205" dur="0.234"> သငျသညျအခြို့သောချရတယ်နှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.439" dur="0.1"> သငျသညျအခြို့သောချို့ယွင်းချက်များရရှိပါသည်နှင့်သော</text>
<text sub="clublinks" start="72.539" dur="0.1"> သင်အချို့ချို့ယွင်းချက်တွေရပြီနှင့့့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.639" dur="0.033"> သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့့့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.067"> သငျသညျအခြို့သောချို့ယွင်းချက်တွေရပြီနှင့်သွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.739" dur="0.067"> သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့်ဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.806" dur="0.066"> သငျသညျအခြို့သော DOWNPOURS ရရှိပါသည့်ဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="72.872" dur="0.234"> ့ဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="73.106" dur="0.1"> ့ဖြစ်ဖို့သွားရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.1"> ့ဖြစ်သွားတော့မည်</text>
<text sub="clublinks" start="73.306" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖြစ်သွားမယ့်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="73.406" dur="0.134"> ့ဖြစ်ခြင်းသွားဒီနေရာမှာဒီနည်းကို</text>
<text sub="clublinks" start="73.54" dur="0.066"> ဒီနည်းကိုဖွစျဖို့ဒီနည်းကိုဒီမနက်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.201"> ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်</text>
<text sub="clublinks" start="73.807" dur="0.066"> ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.167"> ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="74.04" dur="2.002"> ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်အရှေ့တောင်ဘက်၌</text>
<text sub="clublinks" start="76.042" dur="0.2"> ဒီမှာဒီနည်းကိုနံနက်ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA ၌ပုံပြင်။</text>
<text sub="clublinks" start="76.242" dur="0.167"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။</text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.1"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ WE</text>
<text sub="clublinks" start="76.509" dur="0.1"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ငါတို့မသိဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="76.609" dur="0.134"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ငါတို့မရှိကြပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="76.743" dur="0.167"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ကျနော်တို့တကယ်မရှိကြပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="76.91" dur="0.066"> ဒီမှာအရှေ့တောင်ဘက် Louisiana ။ ကျနော်တို့တစုံတခုမျှအမှန်တကယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="76.976" dur="0.234"> ကျနော်တို့တစုံတခုမျှအမှန်တကယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="77.21" dur="0.067"> ကျနော်တို့တကယ်ကိုသွားစရာမလိုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="77.277" dur="0.133"> ကျနော်တို့တကယ်ဘာမှမသွားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="77.41" dur="0.067"> ကျနော်တို့တကယ်ဘာမှလွဲပြီးသွားစရာမလိုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="77.477" dur="0.1"> WE အမှန်တကယ်မရှိကြပါဘူး FOR မှလွဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="77.577" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်မှလွဲလျှင်ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာပါ</text>
<text sub="clublinks" start="77.644" dur="0.267"> တချို့အတွက်မှလွဲ။ သွား</text>
<text sub="clublinks" start="77.911" dur="0.133"> အချို့သော SHOWER FOR မှလွဲ။ သွား</text>
<text sub="clublinks" start="78.044" dur="0.1"> ရရှိရန်အတွက်အချို့သော SHOWER များအတွက်မှလွဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="78.144" dur="0.1"> အချို့သောစျေးဝယ်သူများအတွက်မှလွဲ။ သွား။</text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> အဲဒီမှာတချို့စျေးသည်များမှလွဲ။ သွားအဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> အဲဒီမှာဖြောင့်ရရှိခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="1.569"> အဲဒီမှာဖြောင့် GET</text>
<text sub="clublinks" start="80.08" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖြောင့်ရရှိခြင်းသို့</text>
<text sub="clublinks" start="80.18" dur="0.133"> အဲဒီမှာဖြောင့် GET</text>
<text sub="clublinks" start="80.313" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="80.413" dur="0.134"> အဲဒီမှာညာဘက်ရရှိမှု OFF အမျိုးအစား</text>
<text sub="clublinks" start="80.547" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိခြင်း OFF OFF အမျိုးအစား</text>
<text sub="clublinks" start="80.647" dur="0.066"> အဲဒီမှာဖြောင့် GET ရရှိခြင်းကမ်းခြေကမ်းခြေသို့</text>
<text sub="clublinks" start="80.713" dur="0.167"> ကမ်းခြေကမ်းခြေသို့</text>
<text sub="clublinks" start="80.88" dur="0.067"> ကမ်းခြေကမ်းခြေသို့</text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.134"> ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။</text>
<text sub="clublinks" start="81.081" dur="0.1"> ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="81.181" dur="0.066"> ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ ထဲသို့ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="81.247" dur="0.134"> ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ ထဲသို့ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="81.381" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်း၏ကမ်းခြေသို့။ အသံထဲသို့ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="81.448" dur="0.166"> ST ၏ အသံထဲသို့ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="81.614" dur="0.067"> ST ၏ အသံထဲသို့ BERNARD ။</text>
<text sub="clublinks" start="81.681" dur="0.2"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="81.881" dur="0.067"> ။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="81.948" dur="0.134"> ။ ဒါပေမဲ့၏</text>
<text sub="clublinks" start="82.082" dur="0.066"> ။ ဒါပေမဲ့သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="82.148" dur="2.069"> ။ ဒါပေမဲ့သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="84.217" dur="0.167"> ။ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.067"> ။ သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မမြင်ရ</text>
<text sub="clublinks" start="84.451" dur="0.266"> သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်မမြင်ရ</text>
<text sub="clublinks" start="84.717" dur="0.067"> သို့သော်သင်တန်း၏တကယ်တော့ဘာမှမကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="84.784" dur="0.067"> သို့သော်သင်တန်း၏တစုံတခုကိုမျှမြင်နေမဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="84.851" dur="0.167"> သို့သော်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအမှန်တကယ်မမြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="85.018" dur="0.1"> သို့သော်သင်တန်း၏လူ ဦး ရေတွင်အရာခပ်သိမ်းကိုတကယ်မမြင်ရပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.067"> သို့သော်သင်တန်းသည်လူကြိုက်များသောဒေသများတွင်မည်သည့်အရာမျှမမြင်ရပါ</text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.166"> လူ ဦး ရေထူထပ်သောနေရာဒေသရှိမည်သည့်အရာမဆို</text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> လူနေထူထပ်သောနေရာများတွင်မည်သည့်အရာမဆို</text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.1"> ဒီနေရာမှာလူ ဦး ရေဒေသဆိုင်ရာတစ်ခုခု</text>
<text sub="clublinks" start="85.552" dur="0.1"> ဒီနေရာမှာလူ ဦး ရေထူထပ်သောမည်သည့်နေရာ၌မဆို။</text>
<text sub="clublinks" start="85.652" dur="0.3"> ဤအချက်မှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="85.952" dur="2.336"> ဤအချက်မှာ။ Hurricane</text>
<text sub="clublinks" start="88.288" dur="0.1"> ဤအချက်မှာ။ Hurricane Tallyies</text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.133"> ဤအချက်မှာ။ Hurricane Tallyies ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="88.521" dur="0.1"> ဤအချက်မှာ။ Hurricane TALLIES AS ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.067"> ဤအချက်မှာ။ OF Hurricane Tallyies ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="88.688" dur="0.234"> OF Hurricane Tallyies ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="88.922" dur="0.066"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့ AS ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.067"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND</text>
<text sub="clublinks" start="89.055" dur="0.067"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့နှင့်သင်ခြေရာခံ</text>
<text sub="clublinks" start="89.122" dur="0.067"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်နိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="89.189" dur="0.1"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်မြင်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="89.289" dur="0.167"> Hurricane Tallyies သောကြာနေ့အဖြစ်ခြေရာခံ AND သင်မြင်နိုင်ပါသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="89.456" dur="0.166"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။</text>
<text sub="clublinks" start="89.622" dur="0.1"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >></text>
<text sub="clublinks" start="89.722" dur="0.134"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့</text>
<text sub="clublinks" start="89.856" dur="0.133"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့လုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="89.989" dur="0.167"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့မျှော်လင့်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.034"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့အိုင်တီမျှော်လင့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="90.19" dur="0.1"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့အိုင်တီမျှော်လင့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="90.29" dur="0.066"> သောကြာနေ့နှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ >> သူတို့လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="90.356" dur="0.201"> >> သူတို့လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.1"> >> သူတို့လုပ်ဖို့ဒီမျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="90.657" dur="1.535"> >> သူတို့ကဒီနည်းကိုမျှော်လင့်လုပ်ပါလှည့်</text>
<text sub="clublinks" start="92.192" dur="0.166"> >> သူတို့က IT မျှော်လင့်ထားလုပ်ပါ AND ဖွင့်</text>
<text sub="clublinks" start="92.358" dur="0.067"> >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ဒီနည်းကိုဖွင့်နှင့်မျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="0.167"> >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်တယ်ဒီအလှည့်အပြောင်း</text>
<text sub="clublinks" start="92.592" dur="0.067"> >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ဒီနည်းကိုဖွင့်နှင့်နောက်ထပ်</text>
<text sub="clublinks" start="92.659" dur="0.066"> >> သူတို့ကဖွင့်မျှော်လင့်တယ်, ထိုဖွင့်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်</text>
<text sub="clublinks" start="92.725" dur="0.067"> >> သူတို့ကအိုင်တီမျှော်လင့်ပါဘူးတစ် ဦး ကဖွင့်နှင့်တစ် ဦး ၏နောက်ထပ်</text>
<text sub="clublinks" start="92.792" dur="0.301"> နောက်ထပ်ဖွင့်သောမျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="93.093" dur="0.1"> နောက်ထပ်ဖွင့်နှင့်မြောက်ပိုင်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="93.193" dur="0.066"> နောက်ထပ်ဖွင့်သောမြောက်ပိုင်းလည်ပတ်</text>
<text sub="clublinks" start="93.259" dur="0.067"> နောက်ထပ်ဖွင့်နှင့်မြောက်ပိုင်းသို့လည်ပတ် AS</text>
<text sub="clublinks" start="93.326" dur="0.067"> နောက်ထပ်ဖွင့်သောမြောက်ပိုင်းငါတို့ကဲ့သို့ငါတို့လည်ပတ်</text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.067"> နောက်ထပ်ဖွင့်သောအမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးမြိုးနှကျောကြှနျုပျတို့အလှည့်အလှည့်</text>
<text sub="clublinks" start="93.46" dur="0.3"> WE သွားလေ၏အဖြစ်မြောက်ပိုင်းသို့လှည့်</text>
<text sub="clublinks" start="93.76" dur="0.1"> မြောက်ဘက်သို့ငါတို့လှည့်လည်</text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.1"> ယနေ့ငါတို့သွားသကဲ့သို့မြောက်ပိုင်းသို့လှည့်။</text>
<text sub="clublinks" start="93.96" dur="0.2"> ဒီနေ့မှတဆင့်။</text>
<text sub="clublinks" start="94.16" dur="0.1"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.1"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="94.36" dur="0.034"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီသွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.067"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီသွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="94.461" dur="0.166"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီဖြစ်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="94.627" dur="0.067"> ဒီနေ့မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အိုင်တီအထွေထွေဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="94.694" dur="2.569"> ဒါပေမဲ့အိုင်တီအထွေထွေဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="97.263" dur="0.134"> ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့် WOBBLING ခံရဖို့ရှိပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.1"> ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="97.497" dur="0.1"> ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်သွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="97.597" dur="0.133"> ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="97.73" dur="0.167"> ဒီမှာလှည့်လည်။</text>
<text sub="clublinks" start="97.897" dur="0.167"> ဒီမှာလှည့်လည်။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="0.1"> ဒီမှာလှည့်လည်။ ငါတို့လို</text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စေနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မြင်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.167"> ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တစ် ဦး ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ</text>
<text sub="clublinks" start="98.531" dur="0.067"> ဒီမှာလှည့်လည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.267"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.067"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="98.932" dur="0.1"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု OR ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.167"> ဒါကြောင့်ငါတို့အနောက်မြောက်သို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="99.199" dur="0.066"> ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="99.265" dur="0.067"> သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="0.067"> အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလား</text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="1.935"> ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ် AN</text>
<text sub="clublinks" start="101.334" dur="0.167"> ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့တစ်ခု</text>
<text sub="clublinks" start="101.501" dur="0.067"> ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်အနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု</text>
<text sub="clublinks" start="101.568" dur="0.1"> ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်အနောက်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="101.668" dur="0.167"> ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်အရှေ့ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်မြောက်ကိုရီးယား</text>
<text sub="clublinks" start="101.835" dur="0.066"> ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်အနောက်ရွှေ့ပြောင်းမှုသို့မဟုတ်အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="101.901" dur="0.167"> အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု</text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.067"> အရှေ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မြောက်မြောက်လှုပ်ရှားမှု။</text>
<text sub="clublinks" start="102.135" dur="0.2"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.1"> ။ ယင်း</text>
<text sub="clublinks" start="102.435" dur="0.1"> ။ အိုင်တီရုံပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="102.535" dur="0.167"> ။ အိုင်တီရုံပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="102.702" dur="0.067"> ။ အိုင်တီရုံခရီးသွားလာ</text>
<text sub="clublinks" start="102.769" dur="0.067"> ။ ဒါ SO ခရီးသွားလာပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="102.836" dur="0.233"> ဒါ SO ခရီးသွားလာပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.1"> ဒါ SO တဖြည်းဖြည်းခရီးသွား့</text>
<text sub="clublinks" start="103.169" dur="0.1"> အိုင်တီဒါခရီးသွားလာရုံပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="103.269" dur="0.034"> အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီသွား</text>
<text sub="clublinks" start="103.303" dur="0.066"> အိုင်တီဒီနည်းနဲ့ခရီးသွားလာ့့အိုင်တီသွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီဖြစ်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.1"> အိုင်တီဒါခရီးသွားရုံတင့်တယ်အိုင်တီ၌ဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.067"> အိုင်တီဒီနည်းကိုခရီးသွားလာ့့အိုင်တီဒီနည်းကိုတွင်ဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="103.603" dur="0.868"> တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="104.471" dur="0.133"> တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="104.604" dur="0.1"> တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာသွားမယ့်ဒီနေရာမှာ BY</text>
<text sub="clublinks" start="104.704" dur="0.1"> 1:00 BY ဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်တဖြည်းဖြည်း</text>
<text sub="clublinks" start="104.804" dur="0.134"> တဖြည်းဖြည်းအိုင်တီဒီနေရာမှာဖြစ်လာမယ့် 1:00 pm တွင် BY</text>
<text sub="clublinks" start="104.938" dur="0.1"> တဖြည်းဖြည်းဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်ယနေ့ည 1:00 BY</text>
<text sub="clublinks" start="105.038" dur="0.067"> တဖြည်းဖြည်းဒီနေရာမှာဒီနည်းကို၌ဖြစ်မယ့်ယနေ့ည 1:00 BY ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.266"> ဒီမှာ 1:00 pm တွင်ရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="105.371" dur="0.101"> 1:00 AM ယနေ့ညအားဖြင့်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.033"> 1:00 AM ယနေ့ညအနားမှာဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="105.505" dur="0.1"> 1:00 AM ယနေ့ည။ ဒီမှာဒီမှာအနားမှာရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="105.605" dur="0.067"> 1:00 AM ယနေ့ညအားဖြင့်ဒီမှာ။ ဒီမှာနီးကပ်လာ</text>
<text sub="clublinks" start="105.672" dur="0.333"> THE နီးကပ်လာ</text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.101"> မစ္စစ္စပီနှင့်နီးကပ်ခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.066"> မစ္စစ္စပီအသံနှင့်နီးကပ်လာခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="2.436"> မစ္စစ္စပီနှင့်နီးကပ်ခြင်းအသံနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="108.608" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီနှင့်နီးစပ်ခြင်းအသံနှင့်ထို့နောက်</text>
<text sub="clublinks" start="108.675" dur="0.233"> မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက်</text>
<text sub="clublinks" start="108.908" dur="0.167"> မစ္စစ္စပီအသံနဲ့လုပ်နေတာ</text>
<text sub="clublinks" start="109.075" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက်လုပ်ရန်</text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီအသံနှင့်ထို့နောက်ကျနော်တို့ LANDFALL လုပ်နေပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီအသံမြည်ပြီးနောက် LANDFALL လုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.309" dur="0.267"> LANDFALL ကိုလုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="109.576" dur="0.166"> LANDFALL လုပ်ခြင်းတစ်ခါတစ်ရံမှာပြောမည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.134"> LANDFALL ကိုလုပ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်လေဗုဒ္ဓဟူးနေ့</text>
<text sub="clublinks" start="109.876" dur="0.067"> LANDFALL ကိုလုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြောမည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.066"> LANDFALL ကိုလုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ကဲ့သို့ပြောနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.201"> တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် AS</text>
<text sub="clublinks" start="110.21" dur="0.133"> တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်အဖြစ်</text>
<text sub="clublinks" start="110.343" dur="0.167"> တစ်ခါတစ်ရံဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းမှာလက်ရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="110.51" dur="0.1"> တစ်ချိန်ချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ခင်းမှာလက်ရှိအတွေးအဖြစ်။</text>
<text sub="clublinks" start="110.61" dur="2.236"> လက်ရှိစဉ်းစား။</text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.066"> လက်ရှိစဉ်းစား။ တစ်နေရာရာ</text>
<text sub="clublinks" start="112.912" dur="0.1"> လက်ရှိစဉ်းစား။ တစ်နေရာရာ၌</text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.134"> လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုခု</text>
<text sub="clublinks" start="113.146" dur="0.233"> လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာ,</text>
<text sub="clublinks" start="113.379" dur="0.067"> လက်ရှိစဉ်းစား။ ဒီနည်းကို ZONE ထဲမှာတစ်နေရာရာ၏</text>
<text sub="clublinks" start="113.446" dur="0.234"> ဒီနည်းကို ZONE ထဲမှာတစ်နေရာရာ၏</text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.066"> ဒီနည်းကို ZONE ၌, သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="0.067"> ဒီဇုန်တွင်တစ်စုံတစ်ခု, သင်တန်း၏ IF</text>
<text sub="clublinks" start="113.813" dur="0.167"> ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာ, အကယ်။ သင်တန်း, သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="0.067"> ဒီဇုန်၌တစ်စုံတစ်ခု, သင်တန်းဆက်ပြောသည်လျှင်သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.167"> သင်တန်းဆက်ပြောသည်ဆိုပါကသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> ဆက်ပြောသည်ဆိုပါကသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> WOBBLE မှဆက်လက်ပါကသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> အိုင်တီ WOBBLE မှဆက်လက်လျှင်သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.1"> ဒီနည်းကို WOBBLE မှဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှင်သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="114.614" dur="0.067"> ဒီနည်းကို WOBBLE နဲ့ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.267"> လှုပ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="114.948" dur="0.1"> IT ကိုရွေ့လျားရန် LANDFALL ပြုလုပ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="115.048" dur="0.067"> IT ကို WOBBLE လုပ်ရန်ဒီမှာ LANDFALL လုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="0.066"> ၎င်းကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ပြုလုပ်နိုင်ပါက IF</text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="1.535"> IT ကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုဒီမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="116.716" dur="0.1"> IT WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုဒီမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="116.816" dur="0.067"> ၎င်းကို WOBBLE လုပ်ရန် LANDFALL ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါက၎င်းသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက</text>
<text sub="clublinks" start="116.883" dur="0.234"> LANDFALL ဒီမှာအိုင်တီဆိုပါက</text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.133"> LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင်</text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.1"> LANDFALL ဒီမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်လျှင်</text>
<text sub="clublinks" start="117.35" dur="0.067"> LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနောက်ထပ်</text>
<text sub="clublinks" start="117.417" dur="0.067"> LANDFALL ဒီမှာနည်းနည်းဖြစ်လျှင်ဒီနည်းကိုနောက်ထပ်နည်း</text>
<text sub="clublinks" start="117.484" dur="0.066"> LANDFALL ဒီမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနောက်တဖန်အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="117.55" dur="0.234"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="117.784" dur="0.067"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီဖြစ်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="117.851" dur="0.033"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုစမ်းကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="117.884" dur="0.1"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုနည်းနည်းကြိုးစားကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="117.984" dur="0.167"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီလုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="118.151" dur="0.1"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုနည်းနည်းဒီနည်းကို LANDFALL လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.067"> အနည်းငယ်ဒီနည်းကိုနည်းနည်းဒီနည်းကို LANDFALL လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.267"> LANDFALL လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="118.585" dur="0.066"> LANDFALL ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="118.651" dur="0.1"> LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင့်အားသင့်ကိုကျော်ဖြတ်စေနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="118.751" dur="2.169"> LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်သိထားသည့်အတိုင်းကြိုးစားပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.1"> LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုးစားသင့်သည်၊ ဘာလ်ဝင်း</text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.067"> LANDFALL ပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုးစားသင့်သည်၊ သင်သိသည်၊ ဘော်လ်တန်လား</text>
<text sub="clublinks" start="121.087" dur="0.234"> သင်သိသည်ဖြစ်စေ၊ ဝဲလ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="121.321" dur="0.133"> သင်သိသောအရာများ၊ ၀ က်ဝံသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.1"> သင်သိသောအရာများ၊ ဝဲလ်ဝင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ။</text>
<text sub="clublinks" start="121.554" dur="0.2"> မိုဘိုင်း County ။</text>
<text sub="clublinks" start="121.754" dur="0.067"> မိုဘိုင်း County ။ သော</text>
<text sub="clublinks" start="121.821" dur="0.167"> မိုဘိုင်း County ။ ဒါက</text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.033"> မိုဘိုင်း County ။ သောဆက်ဆက်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="122.021" dur="0.201"> မိုဘိုင်း County ။ သောတစ် ဦး က IS</text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.066"> မိုဘိုင်း County ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="122.288" dur="0.201"> ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.1"> ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုနှင့်အတူ</text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.066"> ဤသည်နှင့်အတူAကန်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေ</text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="0.034"> ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="122.689" dur="0.167"> ဤအရာသည်တစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု</text>
<text sub="clublinks" start="122.856" dur="0.033"> ဤသည်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်ဤ</text>
<text sub="clublinks" start="122.889" dur="2.836"> ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် 1</text>
<text sub="clublinks" start="125.725" dur="0.067"> ဒါကဒီနည်းကိုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအမျိုးအစား 1 STORM အဖြစ်</text>
<text sub="clublinks" start="125.792" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုတစ် ဦး အဖြစ်အမျိုးအစား 1 Storm</text>
<text sub="clublinks" start="125.959" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုတစ် ဦး ကအမျိုးအစား 1 STORM BY</text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.133"> ဒီနည်းကိုတစ် ဦး ကအမျိုးအစား 1 STORM အဖြစ်ဒီနေ့</text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ကပုံ 1 STORM AS ဒီနေ့ဒီနေ့ရရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="126.359" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ပထမအဆင့် STORM AS သောကြာနေ့သို့</text>
<text sub="clublinks" start="126.426" dur="0.267"> သောကြာနေ့သို့</text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> တနင်္လာနေ့ BY သို့ ALBAMA သို့</text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.101"> တနင်္ဂနွေနေ့က BY သို့ Alabama သို့</text>
<text sub="clublinks" start="126.86" dur="0.066"> တနင်္ဂနွေ BY BY သို့ Alabama သို့</text>
<text sub="clublinks" start="126.926" dur="0.134"> တနင်္ဂနွေ BY BY သို့ Alabama သို့ BY ပြီးတော့</text>
<text sub="clublinks" start="127.06" dur="0.067"> တနင်္ဂနွေနေ့အနေဖြင့် Alabama သို့, ပြီးတော့သောကြာနေ့</text>
<text sub="clublinks" start="127.127" dur="0.066"> တနင်္ဂနွေအောဘားမားသို့နှင့်ထို့နောက်အိုင်တီသောကြာနေ့အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="127.193" dur="0.167"> သောကြာနေ့အိုင်တီ ALABAMA ကို</text>
<text sub="clublinks" start="127.36" dur="0.1"> Alabama နှင့်သောကြာနေ့အိုင်တီ IS IS</text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="2.302"> Alabama ပြီးနောက်သောကြာနေ့သို့အိုင်ထဲသို့</text>
<text sub="clublinks" start="129.762" dur="0.167"> Alabama နှင့်သောကြာနေ့အိုင်တီဂျော်ဂျီယာသို့ IS ။</text>
<text sub="clublinks" start="129.929" dur="0.167"> ဂျော်ဂျီယာသို့။</text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.134"> ဂျော်ဂျီယာသို့။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="130.23" dur="0.1"> ဂျော်ဂျီယာသို့။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="130.33" dur="0.167"> ဂျော်ဂျီယာသို့။ SO သက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="130.497" dur="0.066"> ဂျော်ဂျီယာသို့။ အရှေ့တောင်ဘက်သို့သက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="130.563" dur="0.301"> အရှေ့တောင်ဘက်သို့သက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="130.864" dur="0.1"> SOUTHEAST LOUISIANA တွင်သက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="130.964" dur="0.066"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA တွင်ထိုသို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="131.03" dur="0.101"> အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေသေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="131.131" dur="0.066"> အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိနေသေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.267"> Louisiana နေဆဲအလွန်</text>
<text sub="clublinks" start="131.464" dur="0.1"> Louisiana နေဆဲအလွန်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="131.564" dur="0.167"> အနည်းဆုံး။</text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.067"> အနည်းဆုံး။ >></text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.1"> အနည်းဆုံး။ >> WE</text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.067"> အနည်းဆုံး။ >> WE နိုင်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.033"> အနည်းဆုံး။ >> ကျနော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="131.998" dur="0.067"> အနည်းဆုံး။ >> WE တစ် ဦး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="132.065" dur="1.868"> အနည်းဆုံး။ >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="133.933" dur="0.067"> အနည်းဆုံး။ >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="134" dur="0.2"> >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="134.2" dur="0.067"> >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="134.267" dur="0.1"> >> ဒီမှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> >> WE အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.1"> >> WE ဒီမှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ဒီမှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="134.567" dur="0.2"> ဒီမှာဒီမှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="134.767" dur="0.134"> ဒီမှာဒီမှာ။ မင်း</text>
<text sub="clublinks" start="134.901" dur="0.067"> ဒီမှာဒီမှာ။ သတိထားမိ</text>
<text sub="clublinks" start="134.968" dur="0.1"> ဒီမှာဒီမှာ။ မင်းတို့သတိထားမိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="135.068" dur="0.133"> ဒီမှာဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာကိုသင်သတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.201" dur="0.067"> ဒီမှာဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာရှင်ကိုသတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.268" dur="0.2"> ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာရှင်ကိုသတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်လ်ကိုသင်သတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.568" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာကိုသတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.635" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသတိပြုမိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသင်သတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.702" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္KEာန်ကိုထိန်းထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုသင်သတိပြုမိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="135.802" dur="0.133"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုကောင်းကင်၌ခိုင်မြဲအောင်ထားခြင်းသတိပြုမိသည်၊</text>
<text sub="clublinks" start="135.935" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကိုကောင်းကင်၌ကြီးစွာခုန်အောင်ထိန်းထားသည်ကိုသတိပြုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="136.002" dur="0.2"> ကောင်းကင်၏ခဲယဉ်း, Heavy</text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.1"> မိုး၏ခဲ, မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း။</text>
<text sub="clublinks" start="136.302" dur="1.769"> ရိုင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="138.071" dur="0.067"> ရိုင်း။ THE</text>
<text sub="clublinks" start="138.138" dur="0.166"> ရိုင်း။ မျက်လုံး</text>
<text sub="clublinks" start="138.304" dur="0.1"> ရိုင်း။ မျက်လုံးဝေါလ်</text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.134"> ရိုင်း။ ဒီမှာမြင်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="0.067"> ရိုင်း။ ဒီမှာကောင်းပြီမျက်လုံးများ</text>
<text sub="clublinks" start="138.605" dur="0.066"> ရိုင်း။ ဒီမှာအဝါရောင်ပိတ်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="138.671" dur="0.234"> ဒီမှာအဝါရောင်ပိတ်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="138.905" dur="0.1"> ဒီမှာကမ်းခြေအအေး။ ကမ်းခြေ။</text>
<text sub="clublinks" start="139.005" dur="0.2"> ကမ်း။</text>
<text sub="clublinks" start="139.205" dur="0.1"> ကမ်း။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="139.305" dur="0.1"> ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.405" dur="0.034"> ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.439" dur="0.133"> ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.1"> ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.672" dur="0.067"> ကမ်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီကိုကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.739" dur="0.2"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီကိုကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.939" dur="0.034"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.167"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="140.14" dur="2.068"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီနည်းကိုအနောက်ပိုင်း၏ဤမျိုးကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="142.208" dur="0.034"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီအနောက်ပိုင်းဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="142.242" dur="0.1"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="142.342" dur="0.066"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့ရှိသည်ဒီအနောက်ဘက်ဘက်မှာဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="142.408" dur="0.201"> ကြည့်ရှုရန်အနောက်ဘက်ခြမ်းမျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="142.609" dur="0.066"> အဘယ်အရာကိုမြင်မြင်ဖို့အနောက်ဘက်ဘက်မျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="142.675" dur="0.1"> အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အနောက်ဘက်ဘက်မှမျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="142.775" dur="0.034"> အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလိုချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="142.809" dur="0.1"> အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလိုချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="142.909" dur="0.133"> အနောက်ဘက်အခြမ်းကဘာလုပ်ချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့။</text>
<text sub="clublinks" start="143.042" dur="0.167"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="143.209" dur="0.1"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="143.309" dur="0.201"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="143.51" dur="0.033"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီကြိုးစားကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="143.543" dur="0.133"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီကြိုးစားကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="143.676" dur="0.1"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်တီ CREEP ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="143.776" dur="0.101"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="143.877" dur="0.066"> ဘာလုပ်ချင်လဲ။ ဒီနည်းကိုတချို့ထဲကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="143.943" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုတချို့ထဲကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.067"> တချို့အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.133"> တချို့အိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="0.1"> အိုင်တီသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားနိုင်ကမ်းခြေအချို့</text>
<text sub="clublinks" start="144.41" dur="0.101"> အိုင်တီ CEPEP သို့ကမ်းလှမ်းရန်ကမ်းခြေAရိယာ။</text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.2"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။</text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.066"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND</text>
<text sub="clublinks" start="144.777" dur="0.134"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND ၏</text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="1.201"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ AND သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်းရိယာ၏။ နှင့်တောင်ပိုင်းသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="146.246" dur="0.333"> နှင့်တောင်ပိုင်းသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="146.579" dur="0.134"> နှင့်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="146.713" dur="0.167"> နှင့်တောင်မစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="146.88" dur="0.066"> နှင့်တောင်မစ္စစ္စပီရှိသင်တန်း၏သင်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="146.946" dur="0.234"> မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="147.18" dur="0.033"> မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်ကောင်းသွားမည်</text>
<text sub="clublinks" start="147.213" dur="0.1"> သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမယ့်မစ္စစ္စပီ</text>
<text sub="clublinks" start="147.313" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီသင်တွေ့နိုင်တာပေါ့</text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> မစ္စစ္စပီသင်ဖြစ်နိုင်သည်မိုးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.066"> မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာရွာသွန်းကိုမြင်နိုင်တော့မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="147.58" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာမိုးရွာနေမှာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="147.647" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီသင်ဟာယနေ့ခေတ်မှာမိုးရွာနေမှာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="147.714" dur="0.2"> ယနေ့ငါရွာသွန်းကြည့်ရှုမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="147.914" dur="0.133"> ယနေ့မိုးရွာနေသည်ကိုသင်ကြည့်ရှုမည်</text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> ယနေ့ခေတ်တွင်ရွာသွန်းကိုမြင်တော့မည်</text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.1"> ယနေ့ခေတ်တွင်ရွာသွန်းကိုမြင်ရတော့မည်</text>
<text sub="clublinks" start="148.248" dur="0.2"> နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="148.448" dur="1.868"> နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="150.316" dur="0.134"> နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="150.45" dur="0.2"> နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ WINSLOW ကိုကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="150.65" dur="0.067"> နောက်ထပ်အရှေ့ ဦး ခေါင်း။ WINSLOW စွားကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="150.717" dur="0.167"> WINSLOW စွားကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="150.884" dur="0.1"> WINSLOW သို့သွားကြည့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="150.984" dur="0.066"> WINSLOW ကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="151.05" dur="0.067"> WINSLOW ကိုကြည့်ရှုမယ်မေလ 40</text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.067"> WINSLOW ကိုကြည့်ရှုကြည့်ပါစေ 40 AT</text>
<text sub="clublinks" start="151.184" dur="0.167"> WINSLOW ကိုကြည့်ရှုပါစေ, 40 မှာ AT</text>
<text sub="clublinks" start="151.351" dur="0.066"> WSSOW ကိုကြည့်ရှုခြင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် 40 အိုင်ကွန် THE LAKEFRONT</text>
<text sub="clublinks" start="151.417" dur="0.301"> LAKEFRONT မှာ 40 ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="151.718" dur="0.066"> ဖြတ်သန်းသွားသော LAKEFRONT တွင် ၄၀ အထိ</text>
<text sub="clublinks" start="151.784" dur="0.167"> မှတဆင့် THE LAKEFRONT မှာ 40 ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.1"> နေ့လည်ခင်းတစ်လျှောက်တွင် LAKEFRONT တွင် ၄၀ သို့ရောက်ရန်။</text>
<text sub="clublinks" start="152.051" dur="0.234"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။</text>
<text sub="clublinks" start="152.285" dur="0.067"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ နိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="152.352" dur="0.1"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ မြန်မာ</text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.1"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တချို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="152.552" dur="0.1"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တချို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="1.735"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ တစ်စုံတစ်ရာသော G ည့်သည်များမြင်နိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာကတ်ပြားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.067"> နေ့လည်ခင်းမှတဆင့်။ 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="154.521" dur="0.2"> 40 ကျော်တစ်စုံတစ်ရာအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="154.721" dur="0.1"> 40 ကျော်ကျော်အချို့သောသွားလေ၏ကြည့်ရှုနိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="154.821" dur="0.1"> မြောက် 40 တွင်အချို့သောအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="154.921" dur="0.133"> မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ ၄၀ ကျော်ကျော်ရှိသည့်အချို့သောအရာအချို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="155.054" dur="0.101"> 40 ကျော်ကျော်အချို့သောအယောင်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်, မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင်, မေ</text>
<text sub="clublinks" start="155.155" dur="0.166"> မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိအချို့သောပြသနာပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ပိုနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.321" dur="0.067"> မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ ၄၀ ကျော်ကျော်ရှိရာအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ ၅၀ နှစ်ကျော်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.388" dur="0.167"> မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ ကျော်နိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="155.555" dur="0.067"> မြောက်ဘက်ကမ်း, 50 ကျော်နိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="155.622" dur="0.066"> မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ မှ ၆၀ အထိရှိနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.688" dur="0.067"> မြောက်ဘက်ကမ်း၊ ၅၀ မှ ၆၀ အထိရှိနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.755" dur="0.067"> မြောက်ဘက်ကမ်း, သင် 50,000 ကျော် 60 ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.822" dur="0.1"> မြောက်ဘက်ကမ်း, သင်သွားသည်ထက် 50 မှ 60 အထိဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="155.922" dur="0.133"> မြောက်ဘက်ကမ်း, သင်ဆင်းသွားသည် 50 မှ 60 ကျော်ရှိနိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="156.055" dur="0.067"> မြောက်ဘက်ကမ်းခြေ၊ သင်ရှေ့သို့သွားသောအခါ ၅၀ မှ ၆၀ သို့ရောက်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="156.122" dur="0.2"> သင်သွားအဖြစ် AS 60</text>
<text sub="clublinks" start="156.322" dur="0.1"> သငျသညျရှေ့သို့သွား AS</text>
<text sub="clublinks" start="156.422" dur="0.067"> တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်ခြေသို့သွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="156.489" dur="0.067"> တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်၏တောင်ဘက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="156.556" dur="0.1"> တောင်ခြေသို့သွားသည့်အနေဖြင့်တောင်၏တောင်ဘက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.067"> TO သို့သွားသောအခါမြစ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="156.723" dur="1.635"> သင်မြစ်၏တောင်ဘက်သို့သွားသကဲ့သို့ငါမြစ်၏</text>
<text sub="clublinks" start="158.358" dur="0.066"> TO သို့သွားသောအခါမြစ်၏တောင်ဖက်သို့၎င်း၊</text>
<text sub="clublinks" start="158.424" dur="0.234"> မြစ်၏ခံတပ်ပြီးတော့</text>
<text sub="clublinks" start="158.658" dur="0.1"> မြစ်၏ခံသည်နှင့်အမြင့်</text>
<text sub="clublinks" start="158.758" dur="0.067"> မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်ပိုမိုမြင့်မားသောလေ</text>
<text sub="clublinks" start="158.825" dur="0.133"> မြစ်၏ခံသည်နှင့်အမြင့်လေတိုက် AS</text>
<text sub="clublinks" start="158.958" dur="0.067"> မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်သင်ပိုမိုမြင့်မားသော Wind</text>
<text sub="clublinks" start="159.025" dur="0.1"> မြစ်၏ပါးစပ်နှင့်ထို့နောက်သင်၌ရှိသကဲ့သို့မြင့်မားသောလေ</text>
<text sub="clublinks" start="159.125" dur="0.067"> မြစ်၏အရှေ့ဘက်နှင့်တောင်လေအလျားလိုက်တောင်ပိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့</text>
<text sub="clublinks" start="159.192" dur="0.334"> သင်တောင်ပိုင်း၌ရှိသလောက်မြင့်သောလေ</text>
<text sub="clublinks" start="159.526" dur="0.066"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးလေ</text>
<text sub="clublinks" start="159.592" dur="0.1"> တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးလေမုန်တိုင်းများနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="159.692" dur="0.1"> သင်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီနှင့်သွားနေစဉ်အမြင့်ဆုံးလေ</text>
<text sub="clublinks" start="159.792" dur="0.067"> သင်တောင်ပိုင်းမစ္စစ္စပီ၌ရှိသကဲ့သို့သင်ပိုမိုမြင့်မားသောလေထဲသို့</text>
<text sub="clublinks" start="159.859" dur="0.267"> မစ္စစ္စပီသို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="160.126" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီနှင့် Alabama သို့သွား။</text>
<text sub="clublinks" start="160.226" dur="2.369"> Alabama ။</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.134"> Alabama ။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> Alabama ။ ဒါပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> Alabama ။ SO ဘယ်မှာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.133"> Alabama ။ သင့်ရဲ့ဘယ်မှာ SO ဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="163.062" dur="0.067"> Alabama ။ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘယ်မှာ SO ဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="163.129" dur="0.234"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘယ်မှာ SO ဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="163.363" dur="0.066"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးလေဘယ်မှာ SO ဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="0.101"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးလေဘယ်မှာ SO ဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="163.53" dur="0.033"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာလဲဒါဆို</text>
<text sub="clublinks" start="163.563" dur="0.067"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာသွားမယ့် SO</text>
<text sub="clublinks" start="163.63" dur="0.1"> သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံး Wind ဘယ်မှာဖြစ်မယ့် SO ။</text>
<text sub="clublinks" start="163.73" dur="0.2"> လေမယ့်လေ။</text>
<text sub="clublinks" start="163.93" dur="0.067"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို</text>
<text sub="clublinks" start="163.997" dur="0.233"> လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ</text>
<text sub="clublinks" start="164.23" dur="0.034"> လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ 3</text>
<text sub="clublinks" start="164.264" dur="0.066"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3TO</text>
<text sub="clublinks" start="164.33" dur="0.1"> လေမယ့်လေ။ ဒီဟာ3မှ5IS</text>
<text sub="clublinks" start="164.43" dur="0.101"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5pm တွင် IS</text>
<text sub="clublinks" start="164.531" dur="0.1"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5pm တွင် IS OR</text>
<text sub="clublinks" start="164.631" dur="0.133"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5PM သို့မဟုတ် SO IS</text>
<text sub="clublinks" start="164.764" dur="0.067"> လေမယ့်လေ။ ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="164.831" dur="1.735"> ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်နိုင်အောင်</text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.167"> ဒီဟာ3မှ5နာရီအထိဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ဆဲချိတ်ဆွဲ</text>
<text sub="clublinks" start="166.733" dur="0.066"> ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့အထိဆွဲထား</text>
<text sub="clublinks" start="166.799" dur="0.167"> ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေဆဲထွက်ဆွဲထား</text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.1"> ဒီနည်းကို3မှ5နာရီအထိသို့မဟုတ်ဒီတော့ဒီမှာထွက်ချိတ်ဆွဲ</text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.101"> ဒီနည်းကို3မှ5pm အချိန်အထိသို့မဟုတ်ဒီတော့နေထွက်ဒီမှာဆွဲထား</text>
<text sub="clublinks" start="167.167" dur="0.066"> ဒီနည်းကို3မှ5pm အချိန်အထိသို့မဟုတ်ဒီတော့ဒီမှာထွက်ရုံဆွဲထုတ်ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="167.233" dur="0.167"> ထဲကအပြင်၌ဆွဲထားဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="167.4" dur="0.167"> ထဲကအထဲကဆွဲထုတ်ဒီမှာမျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="167.567" dur="0.133"> OUT ထဲကဆွဲထုတ်ဒီမှာရုံမျိုး</text>
<text sub="clublinks" start="167.7" dur="0.1"> OUT ထဲကထွက်ချိတ်ဆက်ဒီမှာအမျိုးမျိုးသော WOBBLING ၏။</text>
<text sub="clublinks" start="167.8" dur="0.234"> WOBBLING ဝန်းကျင်။</text>
<text sub="clublinks" start="168.034" dur="0.1"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ WELL</text>
<text sub="clublinks" start="168.134" dur="0.034"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ ငါတို့ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="168.168" dur="0.133"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ WE ရပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="168.301" dur="0.1"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ ငါတို့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="168.401" dur="0.1"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ</text>
<text sub="clublinks" start="168.501" dur="0.067"> WOBBLING ဝန်းကျင်။ ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ</text>
<text sub="clublinks" start="168.568" dur="0.167"> ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါမညျ</text>
<text sub="clublinks" start="168.735" dur="0.133"> ဤကဲ့သို့သောအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့မွငျရမညျ</text>
<text sub="clublinks" start="168.868" dur="1.769"> ဤအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့တှေ့ရှိရပါလိမျ့မညျ</text>
<text sub="clublinks" start="170.637" dur="0.267"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနောက်နိုင်ငံများ၏မျိုးကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="170.904" dur="0.1"> ဤဆောင်းပါးများကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။ ဤအနောက်နိုင်ငံများ</text>
<text sub="clublinks" start="171.004" dur="0.066"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနောက်တိုင်းဘက်ခြမ်း၏မျိုးမျိုး၊ ဤရွာသားကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="171.07" dur="0.234"> အနောက်ဘက်ဘက်, ဒီရိန်း</text>
<text sub="clublinks" start="171.304" dur="0.1"> အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရိုးရိုးချည်နှောင်ခြင်း,</text>
<text sub="clublinks" start="171.404" dur="0.134"> အနောက်ဘက်ဖက်, ဒီရိုးရိုး Band, တချို့ရဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="171.538" dur="0.133"> အနောက်ဘက်ဖက်, ဒီရိုးရိုးကြိုးနှင့်ချည်နှောင်အချို့</text>
<text sub="clublinks" start="171.671" dur="0.067"> အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရိုးရိုးကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်း, တချို့မိုးသည်းထန်စွာ</text>
<text sub="clublinks" start="171.738" dur="0.066"> အနောက်ဘက်ကမ်း, ဒီရာသီခညျြအနှော, တချို့ရွေ့လျားလှည့်လည်</text>
<text sub="clublinks" start="171.804" dur="0.267"> လှည့်လည် Band, တချို့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း</text>
<text sub="clublinks" start="172.071" dur="0.101"> တီးဝိုင်း, တချို့ရေပန်းများမှတဆင့်ရွေ့။</text>
<text sub="clublinks" start="172.172" dur="0.2"> မှတဆင့်။</text>
<text sub="clublinks" start="172.372" dur="0.133"> မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="172.505" dur="0.067"> မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအား</text>
<text sub="clublinks" start="172.572" dur="2.135"> မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="174.707" dur="0.067"> မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့အလုံးစုံမဟုတ်အားလုံး</text>
<text sub="clublinks" start="174.774" dur="0.167"> မှတဆင့်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့</text>
<text sub="clublinks" start="174.941" dur="0.067"> မှတဆင့်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="175.008" dur="0.233"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="175.241" dur="0.067"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရောညပါဖြစ်ပျက်</text>
<text sub="clublinks" start="175.308" dur="0.1"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ကိုရွာသွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="175.408" dur="0.1"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ကာလကိုရွာသွန်းအတွက်တောင်ဘက်</text>
<text sub="clublinks" start="175.508" dur="0.167"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရောညအရှေ့တောင်အာရှအတွက်ဖြစ်ပျက်</text>
<text sub="clublinks" start="175.675" dur="0.067"> သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်နေ့ရက်ရောဂါဖြစ်ပျက်နေပြီအရှေ့တောင် Louisiana</text>
<text sub="clublinks" start="175.742" dur="0.2"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်အဖြစ်အပျက်</text>
<text sub="clublinks" start="175.942" dur="0.1"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်အဖြစ်အပျက်</text>
<text sub="clublinks" start="176.042" dur="0.1"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အတွက်သေချာပေါက်။</text>
<text sub="clublinks" start="176.142" dur="0.2"> သေချာသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="176.342" dur="0.034"> သေချာသည်။ ဆဌမ</text>
<text sub="clublinks" start="176.376" dur="0.1"> သေချာသည်။ ခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="176.476" dur="0.1"> သေချာသည်။ ကိုးဆဌမ</text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.067"> သေချာသည်။ ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="176.643" dur="0.1"> သေချာသည်။ ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="176.743" dur="2.102"> သေချာသည်။ SURGE ၏ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="178.845" dur="0.067"> သေချာသည်။ ၌ SUNGE ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.2"> ၌ SUNGE ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="179.112" dur="0.1"> ဒီနည်းကို SURGE ကိုးခြေခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="179.212" dur="0.1"> ဒီနေရာမှာ SURGE ၏ခြေကိုးခြောက်ဆ။</text>
<text sub="clublinks" start="179.312" dur="0.167"> ဒီနေရာ။</text>
<text sub="clublinks" start="179.479" dur="0.1"> ဒီနေရာ။ >></text>
<text sub="clublinks" start="179.579" dur="0.067"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို</text>
<text sub="clublinks" start="179.646" dur="0.066"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို IS</text>
<text sub="clublinks" start="179.712" dur="0.134"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို ON</text>
<text sub="clublinks" start="179.846" dur="0.1"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကို ON</text>
<text sub="clublinks" start="179.946" dur="0.133"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာ IS</text>
<text sub="clublinks" start="180.079" dur="0.167"> ဒီနေရာ။ >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။</text>
<text sub="clublinks" start="180.246" dur="0.167"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။</text>
<text sub="clublinks" start="180.413" dur="0.134"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ OF</text>
<text sub="clublinks" start="180.547" dur="0.1"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ ဒါပေါ့</text>
<text sub="clublinks" start="180.647" dur="0.1"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏</text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.133"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE</text>
<text sub="clublinks" start="180.88" dur="0.1"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်း</text>
<text sub="clublinks" start="180.98" dur="0.067"> >> ဒီနည်းကိုအမြင့်ဆုံးတွင် IS ။ သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="181.047" dur="0.2"> သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="181.247" dur="2.503"> သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="0.167"> သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="183.917" dur="0.066"> သင်တန်း၏ Surge စုစုပေါင်းဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="183.983" dur="0.1"> သင်တန်း၏ SURGE စုစုပေါင်းအတူဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.083" dur="0.134"> သင်တန်း၏, SURGE စုစုပေါင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.217" dur="0.067"> သင်တန်း၏, SURGE စုစုပေါင်း THE TRACK BEING နှင့်အတူဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.284" dur="0.166"> ဖြစ်ပျက်နှင့်အတူသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.134"> တစ် ဦး ဖြစ်လာသောလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.584" dur="0.067"> အနည်းငယ်ဖြစ်လျက်ရှိလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.651" dur="0.133"> အနည်းငယ်သောဖြစ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူဆင်းသွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="184.784" dur="0.1"> အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျော်ပြီးသွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="184.884" dur="0.1"> အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားသောလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပျောက်သွား BIT နောက်ထပ်အရှေ့။</text>
<text sub="clublinks" start="184.984" dur="0.234"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။</text>
<text sub="clublinks" start="185.218" dur="0.1"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ WELL</text>
<text sub="clublinks" start="185.318" dur="0.067"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ နေဆဲ</text>
<text sub="clublinks" start="185.385" dur="0.066"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="185.451" dur="0.101"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="185.552" dur="0.1"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ရေကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="185.652" dur="0.066"> အနည်းငယ်ပို့အရှေ့ဘက်။ ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="185.718" dur="0.167"> ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="185.885" dur="0.067"> ကျနော်တို့ရေထကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="185.952" dur="0.234"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="186.186" dur="0.166"> ။ ငါတို့ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="1.468"> ။ ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.067"> ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ကြည့်နေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="187.887" dur="0.167"> ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်NOTကန်အမှန်မမြင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="188.054" dur="0.067"> ။ ကျနော်တို့ဆက်ဆက်မဖြောင့်ကိုကြည့်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="188.121" dur="0.2"> ကျနော်တို့ဆက်ဆက်မဖြောင့်ကိုကြည့်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.067"> WE NOT C NOT NOT ALL ALL ALL ALL NOT NOT NOT ALL ALL WE NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT C NOT NOT NOT NOT NOT NOT J မမှC္WEင် ER ထ္ ALL ရုံလုံးလုံးမတွေ့ရပါ</text>
<text sub="clublinks" start="188.388" dur="0.1"> ငါတို့အားလုံးပဲမမြင်ရပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="188.488" dur="0.067"> ရုပ်ပုံအားလုံးကိုမမြင်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="188.555" dur="0.066"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများအားလုံးကိုမမြင်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="188.621" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများ၏ပုံရိပ်အားလုံးကိုမျှမမြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="188.721" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိပုံရိပ်အကုန်လုံးကိုမမြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="188.821" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိပုံရိပ်အားလုံးကိုမျှမမြင်နိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="188.888" dur="0.234"> အောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ်</text>
<text sub="clublinks" start="189.122" dur="0.1"> ရေအောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ်</text>
<text sub="clublinks" start="189.222" dur="0.1"> ရေအောက်ရှိလမ်း၏ပုံရိပ်အားလုံးရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="189.322" dur="0.167"> ရေရှိပါတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="189.489" dur="0.067"> ရေရှိပါတယ်။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="189.556" dur="0.066"> ရေရှိပါတယ်။ SO ON</text>
<text sub="clublinks" start="189.622" dur="0.1"> ရေရှိပါတယ်။ SO ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="189.722" dur="0.1"> ရေရှိပါတယ်။ SO အရှေ့ဘက်</text>
<text sub="clublinks" start="189.822" dur="2.136"> ရေရှိပါတယ်။ SO အရှေ့ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.234"> ရေရှိပါတယ်။ SO ၏အရှေ့ဘက်ဘဏ် SO</text>
<text sub="clublinks" start="192.192" dur="0.066"> ရေရှိပါတယ်။ SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="192.258" dur="0.167"> SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="192.425" dur="0.067"> SO ဆက်လက်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="192.492" dur="0.1"> ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="192.592" dur="0.167"> ဒါကြောင့်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်အရှေ့ဘက်ဘဏ်ပေါ်မှာ</text>
<text sub="clublinks" start="192.759" dur="0.1"> ဒါကြောင့်အရှေ့မြောက်ဘဏ်ကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်အရှေ့မြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="192.859" dur="0.067"> ဒါကြောင့်အရှေ့တောင်ဘက်မြင်ဆက်လက်ဆက်လက်အရှေ့မြောက်လေ</text>
<text sub="clublinks" start="192.926" dur="0.267"> သောအရှေ့မြောက်လေကြည့်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="193.193" dur="0.066"> သောအရှေ့မြောက်ဘက်တွန်းအားပေးကြည့်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="193.259" dur="0.1"> သောအရှေ့မြောက်ဘက် Wind မြင်လျှင်ကြည့်ရှုရန်</text>
<text sub="clublinks" start="193.359" dur="0.1"> အချို့သော IN အရှေ့မြောက်လေတိုက်ကြည့်ရှုရန်</text>
<text sub="clublinks" start="193.459" dur="0.101"> သောအရှေ့မြောက်ဘက်တွန်းအချို့ကိုရေ၌ကြည့်ရှုရန်။</text>
<text sub="clublinks" start="193.56" dur="0.2"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။</text>
<text sub="clublinks" start="193.76" dur="0.1"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီသော</text>
<text sub="clublinks" start="193.86" dur="0.067"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီတဲ့အရာ</text>
<text sub="clublinks" start="193.927" dur="0.1"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ တူညီသောအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="194.027" dur="0.133"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ Lake ဘို့တူညီတဲ့အရာ</text>
<text sub="clublinks" start="194.16" dur="0.1"> တချို့ရေထဲမှာတွန်း။ Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။</text>
<text sub="clublinks" start="194.26" dur="0.2"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။</text>
<text sub="clublinks" start="194.46" dur="0.101"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="1.534"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="196.095" dur="0.167"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="196.262" dur="0.1"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="196.362" dur="0.134"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="196.496" dur="0.167"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="196.663" dur="0.066"> Lake Born အတွက်တူညီတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="196.729" dur="0.167"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတကြည့်</text>
<text sub="clublinks" start="196.896" dur="0.067"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="196.963" dur="0.133"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ် ဦး</text>
<text sub="clublinks" start="197.096" dur="0.101"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ်လက်မတစ်ခု</text>
<text sub="clublinks" start="197.197" dur="0.066"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ရှုနှစ်ခုလက်မဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="197.263" dur="0.067"> ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစုစုပေါင်းတစ်ခုကြည့်ပါဒီမှာနှစ်ခုလက်မဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="197.33" dur="0.067"> ဒါပေမဲ့အသစ်စက်စက်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါလက်နှစ်ချောင်းအထိဒီမှာကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="197.397" dur="0.267"> နှစ်လက်မဒီမှာအသစ်</text>
<text sub="clublinks" start="197.664" dur="0.133"> New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="197.797" dur="0.067"> ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဒီမှာ New Orleans, မေလ</text>
<text sub="clublinks" start="197.864" dur="0.033"> New Orleans အတွက်ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဖို့, နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="197.897" dur="0.1"> နယူးယောက် Orleans အတွက်ဒီမှာနှစ်ခုလက်မဖို့, နှစ်ခုမှဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="197.997" dur="0.067"> New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ, လေးယောက်မှဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.064" dur="0.067"> New Orleans အတွက်နှစ်လက်မဒီမှာ, လေးယောက် AS ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.131" dur="0.2"> Orleans, လေးနှစ် AS ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.331" dur="0.067"> Orleans, သင့်အားလေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.398" dur="0.066"> Orleans, သငျသညျသှားဖို့လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.464" dur="0.101"> Orleans, သငျသညျတက်သွားအဖြစ်လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="198.565" dur="1.601"> Orleans, သငျသညျသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.167"> Orléans, သင်သည်ပုလဲသို့တက်သွားသကဲ့သို့လေးဆယ့်လေးခုဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="200.333" dur="0.067"> Orleans, သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="200.4" dur="0.066"> Orleans, သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက် AS လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.267"> သင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက်</text>
<text sub="clublinks" start="200.733" dur="0.134"> သင် HANCOCK တွင်ပုလဲမြစ်ထဲသို့တက်</text>
<text sub="clublinks" start="200.867" dur="0.1"> သင် HANCOCK County မှာပုလဲမြစ်သို့တက်။</text>
<text sub="clublinks" start="200.967" dur="0.2"> Hancock County ။</text>
<text sub="clublinks" start="201.167" dur="0.1"> Hancock County ။ AND</text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.067"> Hancock County ။ ပြီးတော့</text>
<text sub="clublinks" start="201.334" dur="0.1"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="201.434" dur="0.067"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီလုပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="201.501" dur="0.067"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီသွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="201.568" dur="0.166"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီတက်လာ</text>
<text sub="clublinks" start="201.734" dur="0.034"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ 15 သို့သွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="201.768" dur="0.066"> Hancock County ။ ပြီးတော့အိုင်တီ 15 သို့သွားတတ်</text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.067"> Hancock County ။ ပြီးတော့ 15 သွား 20 မှတက်တတ်</text>
<text sub="clublinks" start="201.901" dur="0.234"> ပြီးတော့ 15 သွား 20 မှတက်တတ်</text>
<text sub="clublinks" start="202.135" dur="0.067"> ပြီးတော့ 15 လက် 20 မှ 20 လက်ျာသို့သွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="202.202" dur="2.035"> ပြီးတော့ 15 လက် 20 မှ 20 လက်ျာသို့သွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.1"> ပြီးတော့သူက 15 လက် 20 မှ 20 လက်မသငျသညျအတိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.133"> ထိုအခါသင်တက် AS 15 လက်မမှ 20 လက်ျာသို့သွားလေ၏</text>
<text sub="clublinks" start="204.47" dur="0.134"> ပြီးတော့သင်တက်သို့ 15 လက်မ 20 မှလက်ျာတက်သွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="204.604" dur="0.067"> ပြီးတော့သင်က Alabama သို့ထဲသို့ AS 15 လက်မ 20 မှတက်သွားလေ၏</text>
<text sub="clublinks" start="204.671" dur="0.166"> သငျသညျ Alabama သို့သှားသောလက်မ</text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="0.067"> သငျသညျ Alabama သို့သှားသောလက်မ။</text>
<text sub="clublinks" start="204.904" dur="0.234"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="205.138" dur="0.067"> ။ WELL</text>
<text sub="clublinks" start="205.205" dur="0.1"> ။ ငါတို့ပြောပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="205.305" dur="0.033"> ။ ငါးခုပြောပါမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="0.133"> ။ ကျနော်တို့ငါးခုပြောပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="205.471" dur="0.134"> ။ ခုနစ်ခုဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခုနစ်ခု</text>
<text sub="clublinks" start="205.605" dur="0.067"> ။ ခုနစ်ခုလက်မငါးခုပြောမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="205.672" dur="0.2"> ခုနစ်ခုလက်မငါးခုပြောမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="205.872" dur="0.133"> ခုနစ်ခုလက်မငါးခုလောက်ပြောမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="206.005" dur="0.134"> WE ငါးခုပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ် Jackson အဘို့လက်မ</text>
<text sub="clublinks" start="206.139" dur="2.235"> ကျနော်တို့ခုနစ်လက်မ Jackson Jackson ဘို့ငါးခုပြောပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="208.374" dur="0.067"> Jackson ငါးခုလုံးအတွက်ခုနစ်လက်မအထိငါးခုပြောမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="208.441" dur="0.3"> Jackson County ထဲသို့</text>
<text sub="clublinks" start="208.741" dur="0.134"> Jackson County Harrison သို့</text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.067"> Jackson County သို့ Harrison County သို့</text>
<text sub="clublinks" start="208.942" dur="0.1"> Jackson County သို့ Harrison County သို့</text>
<text sub="clublinks" start="209.042" dur="0.1"> Jackson County သို့ Harrison County သို့ပြီးတော့</text>
<text sub="clublinks" start="209.142" dur="0.067"> Jackson County သို့ Harrison County ထဲသို့သုံးပြီးတော့</text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="0.166"> Harry County ပြီးတော့သုံး</text>
<text sub="clublinks" start="209.375" dur="0.067"> Harry County ပြီးတော့သုံး</text>
<text sub="clublinks" start="209.442" dur="0.134"> Harry County နှင့်သုံးခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="209.576" dur="0.033"> Harry County နှင့်သုံးခုခြောက်ဆလက်မ</text>
<text sub="clublinks" start="209.609" dur="0.133"> Harry County နှင့်သုံးခုခြောက်ဆလက်မတစ် ဦး</text>
<text sub="clublinks" start="209.742" dur="0.067"> Harrison County ပြီးတော့သုံးခြောက်ဆလက်မတစ်နည်းနည်း</text>
<text sub="clublinks" start="209.809" dur="0.067"> Harry County နှင့်ထို့နောက်သုံးခုခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT</text>
<text sub="clublinks" start="209.876" dur="0.233"> ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT</text>
<text sub="clublinks" start="210.109" dur="0.067"> ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT အနီးကပ်</text>
<text sub="clublinks" start="210.176" dur="0.167"> ခြောက်လက်မအနည်းငယ် BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာချ</text>
<text sub="clublinks" start="210.343" dur="0.067"> ခြောက်လက်မနည်းနည်း BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာအောက်သို့</text>
<text sub="clublinks" start="210.41" dur="0.1"> ခြောက်လက်မနည်းနည်း BIT ပိုမိုနီးကပ်စွာ THE TO သို့</text>
<text sub="clublinks" start="210.51" dur="0.1"> SIX INCHES အနည်းငယ် BIT နီးကပ်လာကမ်းခြေဆီသို့။</text>
<text sub="clublinks" start="210.61" dur="2.069"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။</text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.1"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="212.779" dur="0.1"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီနည်းကို</text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.2"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီနည်းကိုရှိပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="213.079" dur="0.1"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="213.179" dur="0.067"> ကမ်းခြေဆီသို့ချဉ်းကပ်။ ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိန်း</text>
<text sub="clublinks" start="213.246" dur="0.233"> ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိန်း</text>
<text sub="clublinks" start="213.479" dur="0.101"> ဒီတော့စီမံခန့်ခွဲရိုးရိုးစုစုပေါင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="213.58" dur="0.2"> စုစုပေါင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="213.78" dur="0.1"> စုစုပေါင်း။ ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.067"> စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="213.947" dur="0.1"> စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="214.047" dur="0.066"> စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="214.113" dur="0.067"> စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုသင်မကြည့်မိပါစေနဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="214.18" dur="0.034"> စုစုပေါင်း။ ဒီနည်းကိုကြည့်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="214.214" dur="0.066"> စုစုပေါင်း။ ဒီတစ်ချက်မကြည့်ရအောင်</text>
<text sub="clublinks" start="214.28" dur="0.2"> ဒီတစ်ချက်မကြည့်ရအောင်</text>
<text sub="clublinks" start="214.48" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ ဦး</text>
<text sub="clublinks" start="214.547" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="214.647" dur="0.067"> ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကိုရွာစေတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="214.714" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မိုးရွာနေတဲ့မိုးစက်တစ်စင်းကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.066"> ဒီနည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မိုးရွာနေလို့သင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="214.847" dur="1.736"> ဒီနည်းကိုကြည့်ကြည့်ပါနဲ့မိုးရွာတာကိုသင်တွေ့ပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="216.583" dur="0.066"> ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုတ်တရက်မိုးရွာနေလို့သင်ရပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="216.649" dur="0.234"> သင်တစ် ဦး ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာချ</text>
<text sub="clublinks" start="216.883" dur="0.067"> သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာစေ</text>
<text sub="clublinks" start="216.95" dur="0.133"> သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းမိုးရွာချ</text>
<text sub="clublinks" start="217.083" dur="0.067"> သင်အနည်းငယ်ရရှိသည်အတိုင်းရွာသွန်းမှုပိုနည်းသောအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.133"> အနည်းငယ်ရတဲ့အခါရွာသွန်းမှုနည်းနည်းနည်းနည်းထပ်တိုးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="217.283" dur="0.067"> သင်အနည်းငယ်နည်းနည်းရလာသည်နှင့်အမျှမိုးရွာချသည်အထိဝေးသည်သို့သွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="217.35" dur="0.267"> အနည်းငယ် BIT ဝေးရှေ့သို့</text>
<text sub="clublinks" start="217.617" dur="0.067"> အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND</text>
<text sub="clublinks" start="217.684" dur="0.1"> အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND AND</text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.1"> အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် OFF ဆီသို့ HAMMOND နှင့်သွား</text>
<text sub="clublinks" start="217.884" dur="0.067"> အနည်းငယ် BIT ဝေးရှေ့သို့သွားသှားသှားကွ</text>
<text sub="clublinks" start="217.951" dur="0.066"> အနည်းငယ် BIT ဝေး OFF သို့သွား Hammond နှင့်ထဲသို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="218.017" dur="0.234"> သှားသှားသှားကွနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="218.251" dur="0.1"> သှားနှင့် BATON သို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="218.351" dur="0.1"> သှားနှင့် BATON ROU သို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="218.451" dur="3.036"> သှားနှင့် BATON ROUGE Aရိယာသို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="221.487" dur="0.167"> သှားနှင့် BATON ROUGE Aရိယာခဲ</text>
<text sub="clublinks" start="221.654" dur="0.067"> သှားနှင့် BATON ROUGE REရိယာခဲသမျှ</text>
<text sub="clublinks" start="221.721" dur="0.267"> BATON Rouge ခက်ခဲပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="221.988" dur="0.067"> BATON ROUGE ANရိယာအကျယ်တ ၀ င့်သက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.066"> BATON ROUGE သည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="222.121" dur="0.101"> BATON ROUGE သည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="222.222" dur="0.1"> BATON ROUGE သည်အခြားသောအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="222.322" dur="0.033"> BATON ROUGE ထက်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသက်ရောက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="222.355" dur="0.067"> BATON ROUGE Aရိယာတစ် ဦး ထက်အခြားအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုခက်ခဲ</text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.233"> အခြားတစ် ဦး ကထက်သက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="222.655" dur="0.1"> အေးခဲသောအခြားအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု။</text>
<text sub="clublinks" start="222.755" dur="0.201"> အေးခဲသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="222.956" dur="0.1"> အေးခဲသည်။ ကွမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="223.056" dur="0.133"> အေးခဲသည်။ Kurds လေ</text>
<text sub="clublinks" start="223.189" dur="0.034"> အေးခဲသည်။ ရယူခြင်း Kind လေ</text>
<text sub="clublinks" start="223.223" dur="0.066"> အေးခဲသည်။ ရဖို့လေ</text>
<text sub="clublinks" start="223.289" dur="0.1"> အေးခဲသည်။ ပေါင်မုန့် 53 မှလေတိုက်</text>
<text sub="clublinks" start="223.389" dur="0.067"> အေးခဲသည်။ KURD လေတိုက် 53 သို့သွားလေ၏</text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="0.167"> KURD လေတိုက် 53 သို့သွားလေ၏</text>
<text sub="clublinks" start="223.623" dur="1.935"> ပေါင်မုန့် 53 သို့သွားလေ၏လေ</text>
<text sub="clublinks" start="225.558" dur="0.134"> ပေါင် ၅၃ သို့သွားသောတောင်လေ</text>
<text sub="clublinks" start="225.692" dur="0.233"> ပါးစပ်။</text>
<text sub="clublinks" start="225.925" dur="0.1"> ပါးစပ်။ သုံးဆယ်</text>
<text sub="clublinks" start="226.025" dur="0.067"> ပါးစပ်။ သုံးဆယ့်ခြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="226.092" dur="0.1"> ပါးစပ်။ သုံးဆယ်ခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="226.192" dur="0.134"> ပါးစပ်။ စည်တွင်သုံးဆယ်ခြောက်ဆ</text>
<text sub="clublinks" start="226.326" dur="0.1"> ပါးစပ်။ SHELL ကမ်းခြေတွင်သုံးဆယ့်ခြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="226.426" dur="0.066"> ပါးစပ်။ SH BE AT AT SH TH TH TH ၃၀ SH W BE SH SH SH SH</text>
<text sub="clublinks" start="226.492" dur="0.267"> SH BE AT AT SH TH TH TH ၃၀ SH W BE SH SH SH SH</text>
<text sub="clublinks" start="226.759" dur="0.034"> SHELL ကမ်းခြေတွင်သုံးဆယ့်ခြောက်ဆို့</text>
<text sub="clublinks" start="226.793" dur="0.133"> ကမ်းရိုးတန်းမှာသုံးဆယ့်ခြောက်ဆယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="226.926" dur="0.1"> ELL AT BE BE SIX TH S သုံးဆယ်ခြောက်ဆယ့်ငါးပေရှိရမည်</text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="1.802"> ELL AT SH F S သုံးဆယ်ခြောက်ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ရောက်နေပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="228.828" dur="0.134"> SH AT SH IR S IX IX S SHELL SH ELL SH SH ELL SH SH SH SH SH SH SH ၃၀ SH SH SH TH SH S IX SH SH SHELL SH SH SHELL SH ၃၀ SH SHELL SH SH SH SH SH SH SH SH SH S SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH</text>
<text sub="clublinks" start="228.962" dur="0.233"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။</text>
<text sub="clublinks" start="229.195" dur="0.1"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ပက်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.134"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ကလေးလေး</text>
<text sub="clublinks" start="229.429" dur="0.133"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ Pety Boy ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="229.562" dur="0.134"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ သော Pety Boy ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="229.696" dur="0.066"> ငါးဆယ်ရှိခြင်းသို့သွား။ ထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.201"> ထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="229.963" dur="0.1"> ထိုင်နေတဲ့သေးငယ်သောကျွန်းလေးကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="230.063" dur="0.066"> ထိုင်နေတဲ့သေးငယ်သောကျွန်းသေးသေးလေးပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="230.129" dur="0.134"> ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ Pety Boy ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="230.263" dur="0.133"> ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ Pety Boy ကျွန်း</text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.1"> ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ PETTY BOY ISLAND JACKSON County တောင်ဘက်တောင်ဘက်။</text>
<text sub="clublinks" start="230.496" dur="0.267"> Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="230.763" dur="0.067"> Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်ထရီနာ</text>
<text sub="clublinks" start="230.83" dur="0.1"> Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်ထရင်းဖြတ်</text>
<text sub="clublinks" start="230.93" dur="0.1"> Jackson County ၏တောင်ပိုင်း။ ကက်သရင်းဖြတ်။</text>
<text sub="clublinks" start="231.03" dur="0.234"> ကက်သရင်းဖြတ်။</text>
<text sub="clublinks" start="231.264" dur="2.402"> ကက်သရင်းဖြတ်။ သောပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="233.666" dur="0.134"> ကက်သရင်းဖြတ်။ သောပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="0.133"> ကက်သရင်းဖြတ်။ သောကျွန်းပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="233.933" dur="0.134"> ကက်သရင်းဖြတ်။ သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="234.067" dur="0.3"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="234.367" dur="0.1"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ တည်မြဲသည်</text>
<text sub="clublinks" start="234.467" dur="0.067"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ ဆက်တိုက်လေ</text>
<text sub="clublinks" start="234.534" dur="0.1"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ ၏တည်ငြိမ်သောလေ</text>
<text sub="clublinks" start="234.634" dur="0.1"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ လေးဆယ်၏တည်ငြိမ်သောလေ</text>
<text sub="clublinks" start="234.734" dur="0.067"> သောကျွန်းပေါ်မှာထိုင်နေသောပါပဲ။ လေးဆယ်၏တည်မြဲသောလေတိုက်</text>
<text sub="clublinks" start="234.801" dur="0.233"> လေးဆယ်၏တည်မြဲသောလေတိုက်</text>
<text sub="clublinks" start="235.034" dur="0.067"> လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်ခံသောအလေအလိုက်</text>
<text sub="clublinks" start="235.101" dur="0.1"> လေးဆယ်သုံးဆယ်၏တည်ရှိနေသောအအေးခန်းလေးဆယ့်ခြောက်</text>
<text sub="clublinks" start="235.201" dur="0.067"> လေးဆယ်သုံးဆယ့်ရှစ်မိုင်၏ရေရှည်တည်တံ့သောအရာ</text>
<text sub="clublinks" start="235.268" dur="0.1"> လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်အအေးလေးဆယ်ဆယ့်ခြောက်မိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="235.368" dur="0.1"> လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်အအေးတစ်နာရီလေးဆယ်ဆယ့်ခြောက်မိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="235.468" dur="0.067"> လေးဆယ်သုံးဆယ်ဆက်တိုက်တိုက်လေယာဉ်လေးနာရီဆယ့်ခြောက်မိုင်နှုန်းတစ်နာရီအတွင်း</text>
<text sub="clublinks" start="235.535" dur="2.135"> နာရီတစ်နာရီလေးဆယ်မိနစ်</text>
<text sub="clublinks" start="237.67" dur="0.167"> တစ်နာရီလေးနာရီမိုင်နှုန်းအကွာအဝေး</text>
<text sub="clublinks" start="237.837" dur="0.134"> တစ်နာရီလျှင်လေးဆယ့်လေးမိုင်လောက်ရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.133"> တစ်နာရီလျှင်လေးဆယ်ဆယ့်လေးမိုင်နှုန်းတွင်ဒေါဖမြို့ရှိလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="238.104" dur="0.1"> ဒီ့ပြင်ကျွန်းမှာတစ်နာရီလေးဆယ့်ခြောက်မိုင်လောက်ရှိတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="238.204" dur="0.167"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။</text>
<text sub="clublinks" start="238.371" dur="0.133"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ SO</text>
<text sub="clublinks" start="238.504" dur="0.167"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ SO သင်ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="238.671" dur="0.1"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ဆက်နေပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="238.771" dur="0.067"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ</text>
<text sub="clublinks" start="238.838" dur="0.067"> DAUPHIN ကျွန်းမှာရှုံးနိမ့်။ ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ</text>
<text sub="clublinks" start="238.905" dur="0.3"> ဒါကြောင့်သင်ရပ်တည်နေ Winds များ</text>
<text sub="clublinks" start="239.205" dur="0.167"> ဒါကြောင့်သင်ဆက်လက်ရပ်တည်နေ WINDES အမြဲတမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="239.372" dur="0.1"> ဒါကြောင့်သင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်ပွဲအချို့သော Tropical ဖြစ်ကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="239.472" dur="0.1"> ဒါကြောင့်သင်တည်ငြိမ်သော Window တွေဆက်တိုက်အပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="239.572" dur="0.067"> ဒါကြောင့်သင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော Winds များရေပန်းစားနေသော Storm Storm</text>
<text sub="clublinks" start="239.639" dur="0.167"> အထူးသဖြင့် TROPICAL မုန်တိုင်းအင်အားစု</text>
<text sub="clublinks" start="239.806" dur="1.935"> ထိန်းသိမ်းထား TERPICAL STORM</text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.133"> သင့်၏အတိုင်းအတာအစဉ်အလာအရမုန်တိုင်းဒဏ်ခံအင်အားစု</text>
<text sub="clublinks" start="241.874" dur="0.134"> သငျသညျသွားလေ၏အတိုင်းအတာအထိ TROPICAL မုန်တိုင်းအင်အားစု</text>
<text sub="clublinks" start="242.008" dur="0.067"> သင်ရှေ့သို့သွားစဉ်ဆက်တိုက်အားဖြည့်အင်အားစု</text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.133"> သင်ဆီသို့သွားစဉ်ဆက်တိုက်အပူပိုင်းဒေသအားအရှိန်အဟုန်</text>
<text sub="clublinks" start="242.208" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်းဆီသို့သင်သွားသည့်အတိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ် TROPICAL STORM FORCE</text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.3"> သင်ကမ်းခြေဆီသို့သွားသကဲ့သို့</text>
<text sub="clublinks" start="242.575" dur="0.1"> ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သင်သွားသည့်အတိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="242.675" dur="0.134"> ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သင်သွားသည့်အနေနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.066"> ကမ်းခြေမစ္စစ္စပီနှင့် ဦး ခေါင်းသို့သင်သွားသောအခါ</text>
<text sub="clublinks" start="242.875" dur="0.101"> သငျသညျကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့ ဦး တည်နှင့်တက် HEADING</text>
<text sub="clublinks" start="242.976" dur="0.066"> သငျသညျကမ်းခြေမစ္စစ္စပီဆီသို့သွားနှင့်ထဲသို့တက်</text>
<text sub="clublinks" start="243.042" dur="0.267"> မစ္စစ္စပီသို့တက်</text>
<text sub="clublinks" start="243.309" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီနှင့် UPLABAMA သို့တက်။</text>
<text sub="clublinks" start="243.409" dur="0.167"> Alabama ။</text>
<text sub="clublinks" start="243.576" dur="0.134"> Alabama ။ OF</text>
<text sub="clublinks" start="243.71" dur="0.1"> Alabama ။ ဒါပေါ့</text>
<text sub="clublinks" start="243.81" dur="0.066"> Alabama ။ သူတို့ကို၏</text>
<text sub="clublinks" start="243.876" dur="0.101"> Alabama ။ သူတို့သညျသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="243.977" dur="1.034"> Alabama ။ သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="245.011" dur="0.067"> Alabama ။ သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="245.078" dur="0.167"> သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="245.245" dur="0.166"> သူတို့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="245.411" dur="0.067"> သူတို့တစ်ခုတည်းသောတိုးလာမယ့်သင်တန်း</text>
<text sub="clublinks" start="245.478" dur="0.067"> သူတို့သာ AS တိုးမြှင့်ဖို့သွားကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="245.545" dur="0.067"> သူတို့တစ်ခုတည်းသောကျနော်တို့တိုးမြှင့်ဖို့သွားကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="245.612" dur="0.2"> သူတို့တစ်ခုတည်းသာကျနော်တို့သွားအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="245.812" dur="0.066"> သူတို့တစ်ခုတည်းသာကျနော်တို့ဖြတ်သန်းသွားတိုးမြှင့်ဖို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="245.878" dur="0.234"> ငါတို့ရှောက်သွားအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="246.112" dur="0.1"> ယနေ့ငါတို့သွားသကဲ့သို့တိုးမြှင့်ဖို့။</text>
<text sub="clublinks" start="246.212" dur="0.167"> ဒီနေ့</text>
<text sub="clublinks" start="246.379" dur="0.1"> ဒီနေ့ SO</text>
<text sub="clublinks" start="246.479" dur="0.134"> ဒီနေ့ SO လေ</text>
<text sub="clublinks" start="246.613" dur="0.1"> ဒီနေ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်</text>
<text sub="clublinks" start="246.713" dur="0.066"> ဒီနေ့ ဒီမှာလေသက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="246.779" dur="0.1"> ဒီနေ့ ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုသက်ရောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="246.879" dur="0.067"> ဒီနေ့ ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုလာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="246.946" dur="0.167"> ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုလာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="247.113" dur="0.067"> ဒီမှာလေတိုက်ပွဲများသွားပါ</text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="2.769"> ဒီမှာလေတိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်လာမယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="249.949" dur="0.134"> ဒီမှာလေတိုက်သက်ရောက်မှုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်မယ့်</text>
<text sub="clublinks" start="250.083" dur="0.1"> ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="250.183" dur="0.067"> ဒီမှာလေတိုက်ခတ်မှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်တော့မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="250.25" dur="0.266"> အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါငါတို့</text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.101"> အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပါပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="250.617" dur="0.1"> အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပဲရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="250.717" dur="0.033"> အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ့်သွားနေပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="250.75" dur="0.1"> အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ့်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="250.85" dur="0.067"> အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်တော့မည်</text>
<text sub="clublinks" start="250.917" dur="0.067"> အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ရတော့မည်</text>
<text sub="clublinks" start="250.984" dur="0.166"> တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="251.15" dur="0.101"> တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="251.251" dur="0.133"> တကယ်တော့့သွားကြည့်ပါသို့မဟုတ်လွဲချော်</text>
<text sub="clublinks" start="251.384" dur="0.1"> တကယ်တော့ HIT သို့မဟုတ်လွဲချော် SHOWER ကြည့်ဖို့သွား</text>
<text sub="clublinks" start="251.484" dur="0.067"> တကယ်တော့့ဒီနေ့ HIT ကြည့်ပါသို့မဟုတ်လွဲချော်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း</text>
<text sub="clublinks" start="251.551" dur="0.067"> တကယ်တော့ဒီနည်းကိုယနေ့ကြည့်ရှုသွားပါသို့မဟုတ်လွဲချော်</text>
<text sub="clublinks" start="251.618" dur="0.3"> ဒီနေ့ OR လွဲချော်</text>
<text sub="clublinks" start="251.918" dur="0.167"> ဒီနေ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်လွဲချော်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="252.085" dur="0.033"> ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီနာတွင်သို့မဟုတ်လွဲချော်သူများ</text>
<text sub="clublinks" start="252.118" dur="0.134"> ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားတွင်အဝေးသို့လွင့်ပြေးသူများ</text>
<text sub="clublinks" start="252.252" dur="0.066"> ဒီနေ့အရှေ့တောင်အာရှလူဝီဇီယားနားသို့လွမ်းဆွတ်မှုအနည်းငယ်သာ</text>
<text sub="clublinks" start="252.318" dur="0.2"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA အနည်းငယ်</text>
<text sub="clublinks" start="252.518" dur="0.101"> အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana နည်းနည်း</text>
<text sub="clublinks" start="252.619" dur="1.468"> အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana အနည်းငယ်သာ BIT</text>
<text sub="clublinks" start="254.087" dur="0.2"> အရှေ့တောင်အာရှ Louisiana နည်းနည်းပိုကျယ်ပြန်ကျယ်ပြန့်</text>
<text sub="clublinks" start="254.287" dur="0.067"> အရှေ့တောင်ဘက် LOUISIANA နည်းနည်းပိုကျယ်ပြန့်ပြီးမစ္စစ္စပီပို</text>
<text sub="clublinks" start="254.354" dur="0.267"> ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်မစ္စစ္စပီ BIT</text>
<text sub="clublinks" start="254.621" dur="0.133"> ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်မစ္စစ္စပီရေကြီးမှု</text>
<text sub="clublinks" start="254.754" dur="0.133"> WIDESPREAD MISSISSIPPI ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုပိုမိုကိုက်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="254.887" dur="0.067"> အဓိကကျသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်မစ္စစ္စIPPIကိုအဓိကကျသည်</text>
<text sub="clublinks" start="254.954" dur="0.067"> အဓိကကျသောခြိမ်းခြောက်နေသောမစ္စစ္စပီပီ (BID နောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်သောနေရာ)</text>
<text sub="clublinks" start="255.021" dur="0.334"> အဓိကအားဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးမှု</text>
<text sub="clublinks" start="255.355" dur="0.166"> မစ္စစ္စပီတွင်ရေကြီးမှုအန္တရာယ် \_ t</text>
<text sub="clublinks" start="255.521" dur="0.067"> Alabama ပြည်နယ်, အဓိကအားဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးမှု</text>
<text sub="clublinks" start="255.588" dur="0.067"> မစ္စစ္စပီ၊ အဘမ်ဘာနှင့်အဓိကရုဏ်း</text>
<text sub="clublinks" start="255.655" dur="0.3"> မစ္စစ္စပီ, Alabama AND</text>
<text sub="clublinks" start="255.955" dur="2.102"> မစ္စစ္စပီ, Alabama နှင့်ဖလိုရီဒါ</text>
<text sub="clublinks" start="258.057" dur="0.134"> မစ္စစ္စပီ, Alabama နှင့်ဖလောရီဒါ 30</text>
<text sub="clublinks" start="258.191" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီ, အလာဘမ်နှင့်ဖလိုရီဒါ ၃၀ အခွင့်အလမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.1"> မစ္စစ္စပီ, အလာဘရာနှင့်Флорида 30 အခွင့်အလမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="258.391" dur="0.067"> ရွာသွန်းနိုင်သည့်မစ္စစ္စပီ, အလာဘရာနှင့်ဖလိုရီဒါ ၃၀</text>
<text sub="clublinks" start="258.458" dur="0.267"> ရွိုင်း 30 အခွင့်အလမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="258.725" dur="0.066"> မိုးမရွာသောФлоридаအခွင့်အလမ်း ၃၀</text>
<text sub="clublinks" start="258.791" dur="0.1"> FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE မနက်ဖြန်</text>
<text sub="clublinks" start="258.891" dur="0.101"> FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE WE START</text>
<text sub="clublinks" start="258.992" dur="0.133"> FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE WE START</text>
<text sub="clublinks" start="259.125" dur="0.067"> FLORIDA 30 အခွင့်အလမ်း WE GRADUAL ကိုစတင်</text>
<text sub="clublinks" start="259.192" dur="0.233"> မနက်ဖြန်ဒီကျောင်းစတင်</text>
<text sub="clublinks" start="259.425" dur="0.1"> နက်ဖြန်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုစတင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="259.525" dur="0.067"> မနက်ဖြန်ငါတို့ခြောက်သွေ့ GRADUAL လမ်းကြောင်းကိုစတင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="259.592" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် GRADUAL ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုစတင်မည်မနက်ဖြန်</text>
<text sub="clublinks" start="259.692" dur="0.1"> မနက်ဖြန်ငါတို့စတင်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့လမ်းကြောင်းကိုစတင်</text>
<text sub="clublinks" start="259.792" dur="0.067"> မနက်ဖြန်ငါတို့ကျောင်းစတင်နေပြီခြောက်သွေ့လမ်းကြောင်းကိုထိုအခါစတင်ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="259.859" dur="0.067"> မနက်ဖြန်ငါတို့ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စတင်ပြီးနောက်ထိုအခါကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="259.926" dur="0.2"> ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းသစ်သို့ကြည့်ရှုပါ</text>
<text sub="clublinks" start="260.126" dur="0.467"> ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်</text>